Ogni giorno con Padre Pio: 365 pensieri del Santo da Pietrelcina | Ilblogdellapreghiera
Kwa ụbọchị na Padre Pio: 365 echiche nke Saint si Pietrelcina
1. Ayi sitere na amara Chineke buru chi n’afọ ọhụrụ; afọ a, nke naanị Chukwu maara ma anyị ga-ahụ ọgwụgwụ, a ga-enwerịrị ihe ọ bụla iji rụkwaa ihe ndị gara aga, ịkọwa maka ọdịnihu; ọrụ dị nsọ na-aga ụkwụ na ụkwụ.
2. Anyi na-agwa onwe anyi na nkwenye zuru oke nke ikwu eziokwu: nkpuru obi m, bido ime ihe oma taa, nihi na i meghi ihe rue ebe a. Ka anyị jee ije n'ihu Chineke. Chineke na-ahụ m, anyị na-ekwughachi ugboro ugboro na onwe anyị, n'omume ọ na-ahụkwa m, ọ na-ekpe m ikpe. Ka anyị jide n'aka na ọ naghị ahụkarị naanị ihe dị mma n'ime anyị.
3. Ndị nwere oge anaghị echere oge. Anyị anaghị eyigharị ruo echi ihe anyị nwere ike ime taa. Nke dị mma na mgbe ahụ olulu na-atụfu azụ…; Oleekwa onye na-asị anyị echi anyị ga-adị ndụ? Ka anyi gee nti n’azu akọnuche anyi, bu olu onye amuma n’ezie: “Taa ma oburu n’inu olu Jehova, achoghi imechi nti gi”. Anyị na-ebili ma na-echekwa akụ, n'ihi na naanị ihe ngwa ngwa gbapụrụ na ngalaba anyị. Ka anyị ghara itinye oge n'etiti oge na ntabi anya.
4. Lee ka oge si dị oke ọnụ ahịa! Ngọzi na-adịrị ndị matara etu esi eji ya eme ihe, n’ihi na onye ọ bụla, n’ụbọchị ikpe, ọ ga-eme ka Onye Ọchịchị Kachasị Elu nwee ihe ndekọ banyere ya. Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na mmadụ niile bịara ghọta ịdị mkpa nke oge, n’ezie mmadụ niile ga-agba mbọ na-emefu ya n’echeghị eche!
5. "Ka anyị bido taa, brothersmụnna m, ime ihe ọma, n'ihi na anyị emebeghị ihe ọ bụla". Okwu ndị a, nke nna seraphic St. Francis dị umeala n'obi ya metụtara onwe ya, ka anyị mee ka anyị bụrụ nke anyị na mbido afọ ọhụrụ a. Anyị emebeghị ihe ọ bụla ruo ụbọchị ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ, ọ dị obere; afọ ndị sochirinụ na ibe anyị na ịrị elu na-enweghị anyị na-eche etu anyị siri jiri ha; ọ bụrụ na onweghị ihe nrụzi, ịgbakwunye, wepụ omume anyị. Anyị biri na atụghị anya dịka otu ụbọchị onye ọka ikpe ebighi-akpọ agaghị akpọ anyị ma jụọ anyị ajụjụ maka ọrụ anyị, otu anyị siri nọrọ oge anyị.
N’agbanyeghi oge obula, anyi gha ezi akuko nke oma, banyere amara obula, na mkpali oma obula, banyere emume enyerela anyi ime ezi ihe. Will ga-echebara mmebi iwu dị nsọ nke Chineke echiche.
6. Mgbe ebube mechara, sị: "Saint Joseph, kpee ekpere maka anyị!".
7. virtkpụrụ omume abụọ a ga-ejigidesi ike, ịdị ụtọ onye agbata obi na ịdị umeala n'obi Chineke.
8. Ikwulu Chineke bụ ụzọ kacha mma ị ga-esi gaa hel.
9. Dochie oriri na nkwari!
10. Otu oge m gosipụtara Nna m ngalaba mara mma nke ifuru ma na-egosi Nna ahụ okooko osisi ọcha ndị mara mma m tiri mkpu: "Lee ka ha si maa mma! ...". "Ee, Nna kwuru, mana mkpụrụ osisi ahụ mara mma karịa ifuru." O mekwara ka m ghọta na ọrụ dị mma karịa agụụ nsọ.
11. Jiri ekpere malite ụbọchị.
12. Akwụsịla n'ịchọ eziokwu, n'ịzụta nke kachasị mma. Dịrị nso na mmetụta nke amara, na-egosipụta mkpali na mmasị ya. Esochichara Kraist na nkuzi ya.
13. Mgbe mkpụrụ obi moụrịkwara ọ fearsụ ma tụọ egwu imejọ Chineke, ọ gaghị akpasu ya iwe, ọ nọghị kwa na-emehie.
14. temptednwa ịnwa bụ ihe nrịba ama na ọ nabatara mkpụrụ obi nabatara nke ọma.
15. Ekwela ka onwe gi ghapu gi. Tụkwasịnụ Chineke obi naanị.
16. Ana m abawanye na nnukwu mkpa ịhapụ onwe m jiri ntụkwasị obi siri ike na ebere Chukwu na itinye naanị olileanya m na Chineke.
17. Ikpe ziri ezi nke Chineke dị oke egwu mana anyị echefula na ebere ya enweghị njedebe.
18. Ka anyi jisie ike jiri obi anyi niile jeere Onyenwe anyi ozi.
Ọ ga na-enye anyị ihe karịrị ihe anyị kwesiri.
19. Nye Chineke otuto ka ọ bụghị nye mmadụ, sọpụrụ Onye Okike na ọbụghị ihe ekere eke.
N'oge ị dịrị, mara etu ị ga-esi kwado ilu iji sonye na nhụjuanya nke Kraịst.
20. Naanị ọchịagha maara mgbe ọ ga-eji onye agha ya. Chere; Gị oge ga-abịa.
21. Kwupu uwa. Gee m nti: otu onye na-eri mmiri n’elu oké osimiri, mmiri riri otu iko mmiri. Kedu ihe dị iche n’etiti abụọ ndị a; o bu na ha anwughi anwu?
22. Na eche mgbe niile na Chukwu na-ahụ ihe niile!
23. Na ndu ime mmụọ ka onye na agba ọsọ, onye nke ka nta na-enwe ike ọgwụgwụ; N'ezie, udo, ihe butere ọ joyụ ebighi ebi, ga-enweta anyị, anyị ga-enwekwa ọ happyụ ma sie ike ruo n'ókè na ibi n'ime ọmụmụ a, anyị ga-eme ka Jizọs biri n'ime anyị, na-anwụ onwe anyị.
24. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwe ihe ubi, ọ dịchaghị mkpa ịgha mkpụrụ, dịka ịgbasa mkpụrụ ahụ n'ọhịa dị mma, ma mkpụrụ a ghọrọ ihe ọkụkụ, ọ dị ezigbo mkpa nye anyị iji hụ na ụta ahụ anaghị ata mkpụrụ osisi ahụ dị nro.
25. Ndụ a anaghị adịte aka. Nke ọzọ dịgidere ruo mgbe ebighị ebi.
26. Mmadu gha agha n’iru n’ihu, ghara ilaghachi ila ndu nke mmụọ; ma ọ bụrụ na ọ na-eme dịka ụgbọ mmiri, nke ọ bụrụ na kama ịga n'ihu ọ kwụsịrị, ikuku na-ezigaghachi ya.
27. Cheta na nne buru ụzọ kuziere nwa ya ije ije site na ịkwado ya, ma ọ ghaghi ije ije na nke ya; yabụ ị ga-eji isi gị tụgharịa uche.
28. Nwa m nwanyị, hụ Ave Maria n'anya!
29. Mmadu aghaghi inweta nzọpụta n’adighi agafe n'oké osimiri nke na ebili mmiri, ma obu mbibi ya. Ugwu nke ndi nsọ bu Calvary; ma site n’ebe ahu o gabigara n’ugwu ozo, nke anakpo Teboa.
30. Achọghi m ihe ọ bụla ma ọ bụghị nke ahụ ma ọ bụ ịnwụ ma ọ bụ hụ Chineke n'anya: ma ọ bụ ọnwụ, ma ọ bụ ịhụnanya; n'ihi na ndu na-enweghi ihunanya di nma karie onwu: ya diri m karie ike inagide anyi karia ugbua.
31. Agaghị m agabiga ọnwa mbụ n’afọ n’ebuteghị mkpụrụ obi gị, nwa m nwanyị m hụrụ n’anya, ekele nke m ma na-emekwa ka obi sie gị ike mgbe niile ụdị obi m nwere n’ebe nke gị nọ, nke m na-agaghị akwụsị akwụsị. Chọrọ ụdị ngọzi niile na obi ụtọ nke mmụọ. Mana ezi nwa m, ana m akwado gị obi a jọrọ njọ: kpachara anya mee ka ọ bụrụ Onye Nzọpụta anyị kachasị nwee obi ụtọ kwa ụbọchị, ma gbaa mbọ hụ na afọ a dị mma karịa afọ gara aga n'ọrụ ọma, n’ihi na ka afọ na-aga, na mgbe ebighị ebi na-abịaru nso, anyị ga-amụba obi ike anyị ma bulie mmụọ anyị na Chineke, jiri ịdị uchu na-ejere ya ozi n’ihe niile ọrụ aka anyị na ọrụ anyị dị ka Ndị Kraịst.
1. Ekpere bu nzipu obi-ayi n’ime nke Chukwu… Mgbe emere nke oma, o n’eduga obi Chukwu ma na akpo kariri inye anyi. Anyi na-agba itufu nkpuru obi anyi mgbe anyi malitere ikpegara Chineke ekpere. O nogidere na ekpere anyi inwe ike nyere anyi aka.
2. Achọrọ m ịbụ naanị friar friar onye na-ekpe ekpere!
3. Na-ekpe ekpere ma nwee olileanya; atụna ụjọ. Ntụgharị uche abaghị uru ọ bụla. Chineke bu obi ebere ma ge nti n’ekpere gi.
4. Ekpere bu ihe kacha mma anyi nwere; ọ bụ mkpịsị ugodi na-emeghe obi Chineke. You ga-ejikwa obi ya gwa Jizọs okwu, ya na egbugbere ọnụ ya; n'ezie, n'ụfọdụ olu, ị ga-agwa ya okwu naanị site n'obi.
5. Site na omumu akwukwo, mmadu na acho Chineke, site na ntughari uche ka mmadu na - ahuta ya.
6. Na-ekpe ekpere mgbe niile ma na-atụgharị uche. Already gwala m na ị bidola. Oh, Chukwu nke a bụ nnukwu ngụgụ obi nye nna hụrụ gị n'anya karịa ka mkpụrụ obi nke ya! Gaan’iru n’iru mgbe nile na ngosiputa nke ihunanya n’ebe Chineke no. N’ezipu ihe ole na ole kwa ubochi: ma n’abali, n’ogidi oriọna ma n’agbusi ike na ikike nke mmuo; ma n'ehihie, n'ọ joyụ na n'ọdịdị na-enwu nke mkpụrụ obi.
7. Ọ bụrụ n’ịgwa Onye-nwe okwu n’ekpere, gwa ya okwu, too ya; ọ bụrụ na ịnweghị ike ikwu okwu dị nkọ, enwela mwute, n'ụzọ nke Onye-nwe, kwụrụ n'ọnụ ụlọ gị dịka ndị ọbịa ma mee ka ọ sọpụrụ gị. Onye na - ahụ anya, ga - enwe ekele maka ọnụnọ gị, ga - agba gị nkịtị, n'oge ọzọ ị ga - akasi gị obi mgbe ọ ga - ejide gị n'aka.
8. Thiszọ a ịnọ n’ihu Chineke naanị iji gosi iwe n’obi anyị ịmata onwe anyị dịka ndị ohu ya kacha dị nsọ, kacha mma, kacha ọcha ma zuo oke.
9. Mgbe ichoro Chukwu nonyere gi n’ekpere, chebara eziokwu gi echiche; gwa ya okwu ma ọ bụrụ na ịnwere ike, kwụsị, gosipụta ma iwepụtakwala nsogbu ọ bụla.
10. never naghị ada ada na ekpere m, nke ị na-arịọ, maka na agaghị m echezọ gị onye furu m ọtụtụ àjà.
Mmom n’Agya a ɔwɔ mma baanu no mu biara nni hɔ. Ekwere m ntụkwasị obi na ọrụ ebere na n’ekpere gị ị gaghị echezọ onye na-ebu obe maka mmadụ niile.
11. Madonna nke Lourdes,
Na-amaghị nwoke na-amaghị nwoke,
kpee ekpere maka m!
Na Lourdes, enweela m ọtụtụ oge.
12. Nkasi obi kacha mma bụ nke sitere n’ekpere.
13. Wepụta oge maka ikpe ekpere.
14. mmụọ ozi nke Chukwu, onye na-azụ m,
mee ka m nwee nghọta, lekọta, jide m ma chịa m
na eji m mmụọ nsọ nyefe m n'aka gị. Amen.
Tinye ekpere a mara mma ọtụtụ mgbe.
15. Ekpere nke ndị nsọ n’eluigwe na mkpụrụ obi ezi omume nọ n’ụwa bụ ihe nsure ọkụ na-agaghị etufu.
16. Kpee ekpere na Joseph Joseph! Kpekuo Saint Joseph ikpere ya nso na ndu ya na oge ikpe azu, ya na Jisos na Meri.
Na-atụgharị uche ma nwee oge ịdị ukwuu nke obi uche nke nne nke Chukwu na nke anyị, ndị, dịka onyinye nke elu igwe toro n’ime ya, na-agbada n’ike.
18. Maria, chebe m!
Nnem, kperem ekpere!
19. Nkume na Rosary!
20. Weta Onyinye Ebube. Ọtụtụ mgbe ị na-agwa Mgbagha Banyere:
O Meri, ebeemeghi mmehie.
kpee ekpere maka anyị ndị na-echigharịkwute gị!
21. Ka e nwee ike itationomi, ịtụgharị uche kwa ụbọchị na ịtụgharị uche na ndụ Jizọs dị mkpa; Site na ịtụgharị uche na ịtụgharị uche na-abịa otuto nke omume ya, ma site na iwere agụụ na nkasi obi ofomi.
22. Dị ka a beesụ, nke na-enweghị oge ọ bụla ịgafe obosara ubi ụfọdụ, iji rute ahịhịa ahụ kachasị amasị, wee daa mba, ma nwee afọ ojuju ma jupụta na mmanụ a honeyụ iji mee mgbanwe amamihe dị na ya. nectar nke okooko osisi na nectar nke ndu: ya mere gi onwe gi, mgbe i chikọtara ya, debe okwu Chineke n’ime obi gi; laghachi azụ na ekwo Ekwo, ya bụ, tụgharịa uche na ya, nyocha ihe ndị dị na ya, chọọ ihe ọ pụtara. Ọ ga - apụta ìhè gị n'ịma mma ya, ọ ga - enweta ike ikpochapụ ọchịchọ ebumpụta ụwa gị, ọ ga - enwe ikike ịgbanwe nke mmụọ nsọ nke mmụọ gị, na - ejikọ gị ọzọ na obi Chineke nke Onyenwe gị.
23. Zọpụta mkpụrụ obi, na-ekpe ekpere mgbe niile.
24. Nwee ndidi ịnọgidesie ike na ntụgharị uche a dị nsọ ma nwee afọ ojuju ịmalite na obere usoro, ọ bụrụhaala na ị nwere ụkwụ ị ga-agba, na nku ka mma iji efe; Afọ ojuju na-erube isi, nke na-abụghị obere ihe maka mkpụrụ obi, onye ahọpụtakwala Chineke maka òkè ya ma hapụzie ịnọ ugbu a obere obere akwụ ga-amịpụta nnukwu anụ a ga-amịpụta. mmanụ a .ụ.
Na-ewedata onwe gị na ihunanya mgbe niile n’ihu Chineke na mmadụ, n’ihi na Chineke na-agwa ndị n’echebere obi ya dị umeala n’ihu Ya.
Agaghị m ekwenye ma ọlị ma yabụ na-ahapụ m ịtụgharị uche naanị n'ihi na ọ dị ka ị nweghị ihe ị na-enweta na ya. Enyere onyinye nke onyinye dị nsọ, ezigbo nwa m nwanyị, n'aka nri Onye Nzọpụta, ma ruo na ị ga-efu efu, ya bụ, ịhụ ahụ gị n'anya na oke gị, na ị ga-agbasokwasị mkpọrọ gị nsọ. ịdị umeala n’obi, Onye-nwe ga-agwa ya ya n’obi gị.
26. Ezi ihe kpatara na ịgaghị enwe ntụgharị uche gị nke ọma, achọpụtara m ya na nke a anaghị m emehie ihe.
Come bịara ịtụgharị uche n'ụdị mgbanwe ụfọdụ, jikọtara ya na oke oke ụjọ, ka ị chọta ihe nwere ike ime mmụọ gị ma nwee nkasi obi; nke a ezukwa iji mee ka ị ghara ịchọta ihe ị na-achọ ma ghara itinye uche gị n'eziokwu ahụ ị na-atụgharị.
Nwa m nwanyị, mara na mgbe mmadụ chọrọ ihe ọsọ ọsọ na anyaukwu maka ihe furu efu, ọ ga-eji aka ya metụ ya, ọ ga-eji anya ya hụ ya otu narị ugboro, ọ gaghị ahụ ya ma ọlị.
Site na nchekasị a na-abaghị uru na nke na-abaghị uru, ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike ibili ma ike gwụ mmụọ na enweghị ike nke uche, ịkwụsị na ihe ahụ na-eburu n'uche; na site na nke a, mgbe ahụ, dị ka ọ kpatara nke ya, a otutu oyi na nzuzu nke mkpụrụ obi kpọmkwem na akụkụ na-emetụta.
Amaara m na enweghị ọgwụgwọ ọzọ na nke a karịa nke a: isi na nchegbu a pụọ, n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị aghụghọ kachasị mma na ezi omume na nraranye siri ike nwere ike inwe; ọ na-eme onwe ya ka ọ na-ekpo ọkụ ọfụma maka ezigbo ọrụ, mana ọ na-eme ya naanị ka ọ jụọ oyi ma mee ka anyị na-agba ọsọ iji mee ka anyị sụọ ngọngọ.
27. Amaghị m imere gị ebere ma ọ bụ gbaghara gị ụzọ nke nleghara anya ileghara mkpakọrịta na ntụgharị uche nsọ. Cheta, nwa m nwanyị, a gaghị enweta ọgwụ ike ewezuga site na ekpere; na aghaghi mmeri ma e wezụga site na ekpere. Yabụ ịhọrọ gị.
28. Ka ọ dị ugbu a, emekpala onwe gị ọnụ ruo etu ị ghara inwe udo nke obi. Jiri ekpere na nnọgidesi ike, jiri obi ike na nwayọ nwayọ na nwayọ kpee ekpere.
29. Ọbụghị Chineke ka a kpọrọ anyị ịzọpụta mkpụrụ obi na ịgbasa ebube ya site n'ọkwa izi ezi; marakwa na nke a abụghị ya bụ naanị ụzọ iji nweta nnukwu ebumnuche abụọ a. Mkpụrụ obi nwere ike igbasa ebube Chineke ma rụọ ọrụ maka nzọpụta nke mkpụrụ obi site na ndụ Ndị Kraịst n'ezie, na-ekpegara Onyenwe anyị ekpere mgbe niile ka 'alaeze ya bịa,' ka e doo aha nsọ ya nsọ ", nke" eduga anyị n'ime. ọnwụnwa ”, nke“ napụtara anyị n'ihe ọjọ ”.
Chia Mariae Virginis,
Pater putative Iesu,
ugbu a gosi m!
1. - Nna, gịnị ka ị na-eme?
- Ana m eme ọnwa nke St. Joseph.
2. - Nna, ị hụrụ m n'anya.
- Anaghị m achọ ịta ahụhụ n'onwe ya; M na-arịọ Chineke, agụụ maka mkpụrụ osisi ọ na-enye m na-agụ m: ọ na-ewetara Chineke otuto, ọ na-azọpụta m brothersmụnne ndị si mba ọzọ a chụpụrụ, ọ na-azọpụta mkpụrụ obi na pọgatrị, gịnị ọzọ ka m chọrọ?
- Nna, gịnị na-ata ahụhụ?
- Mkpuchi Mmehie.
- Kedu ihe ọ bụ maka gị?
- Nri m nke ubochi, nke uto!
3. N'elu ụwa a onye ọ bụla nwere obe ya; kama anyị ga-agba mbọ hụ na anyị abụghị ajọ onye ohi, kama ọ bụ ezigbo onye ohi.
4. Onyenweanyi enweghị ike inye m Cyrenean. Naanị m ga-eme uche Chineke, ọ bụrụ na ọ masịrị m, ndị ọzọ anaghị agụta ọnụ.
5. Jiri nwayọ kpee ekpere!
6. Nke mbu, achorom igwa gi na Jisos choro ndi ya na ha nakokoko n'ihi nleda anya nke mmadu, n’ihi nke a O n’eduba gi n’uzo obi uto nke i jiri okwu m n’uche gi. Mana ka ọrụ ebere ya bụrụ nke a gọziri agọzi mgbe niile, nke maara etu esi agwakọta ụtọ ahụ na ihe ilu ma gbanwee ntaramahụhụ nke ndụ na ụgwọ ọrụ ebighi ebi.
7. Ya mere atula egwu ma obula, mana were onwe gi dika odi nma na emere gi onwe gi dika onye kwesiri ntukwasi obi na onye sonyere ihe mgbu nile nke Man-Chineke. Ya mere, obughi igbahapu ya, kama ihunanya na nnukwute ih'anya ka Chineke na egosi gi. Ọnọdụ a abụghị ntaramahụhụ, kama ọ bụ ịhụnanya na ezigbo ịhụnanya. Ya mere gọzie Onye-nwe ma tụgharịa onwe gị ka ị drinkingụ iko nke Gethsemane.
8. Aghọtala m, nwa m nwanyị na Calvary gị na-enwekwu obi mgbawa maka gị. Mana eche na na Calvary, Jizọs mere mgbapụta anyị na Calvary, nzọpụta nke mkpụrụ obi ndị a gbapụtara ga-emerịrị.
9. Ama m na ị na-ata ahụhụ nke ukwuu, mana ihe ndị a abụghị ihe ịchọ mma nwanyị a na-alụ nwanyị ọhụrụ?
10. Onye-nwe mgbe ụfọdụ na-eme ka ị nwee mmetụta nke obe. Ibu ibu a adighi nma n'anya gi, ma i gha eburu ya nihi na ebere nke ebere ya na agbasa aka gi ma nye gi ike.
11. M ga-ahọrọ otu puku obe, n'ezie, obe nke ọ bụla ga-atọ m ụtọ ma dị m mma, ma ọ bụrụ na enweghị m akaebe a, ya bụ, inwe mmetụta mgbe niile na amaghị ihe dị Onyenwe anyị mma na arụmọrụ m ... Ọ bụ ihe mgbu ibi ndụ dị ka nke a ...
M gbara arụkwaghịm, mana arụkwaghịm, eriri m ga - adị ka oyi, ihe efu! ... Lee ihe omimi! Jizọs kwesịrị ichebara naanị ya echiche.
12. Jesus, Mary, Joseph.
13. Ezi obi di ike mgbe niile; ọ na-ata ahụhụ, ma zobe anya mmiri ya ma kasie onwe ya obi site na ịchụ onwe ya na maka onye agbata obi ya na Chineke.
14. Onye obula malitere ihu agha aghaghi idi njikere ihu ya.
15. Atula egwu nmekpa ahu nihi na ha tinyere nkpuru obi n’ukwu nke obe ma tinye ya n’ọnu uzo nke elu-igwe, ebe O gha acho onye ahu bu mmeri nke onwu, onye g’edughari ya gaudi ebighebi.
16. Mgbe ebube gachara, anyi n’ekpe Saint Joseph.
17. Ka anyị rigo elu na Calvary n'ụba maka ịhụnanya nke onye ahụ kwụsịrị onwe ya maka ịhụnanya anyị na anyị nwere ndidi, obi siri ike na anyị ga-efega Tabor.
18. Jisie ike na-ejikọ ọnụ na Chineke, na-edobe obi gị niile, nsogbu gị niile, were onwe gị niile, jiri ndidi chere mbịaghachi nke ọmarịcha anyanwụ, mgbe nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ ga-enwe mmasị ileta gị site na nnwale nke ịdị umengwụ, tọgbọrọ n'efu na isi. nke mmụọ.
19. Kpee ekpere nye Joseph Joseph!
20. Eeh, m hụrụ obe n’anya, nanị obe; Ahụrụ m ya n’anya n’ihi na m na-ahụ ya mgbe niile n’azụ Jizọs.
21. Ezigbo ndị ohu nke Chineke ji uru nhụjuanya kpọrọ ihe karịa ka o kwekọrọ n’ụzọ Onye Isi anyị si mee njem, bụ onye rụrụ ọrụ ahụike anyị na obe na ndị a na-emegbu emegbu.
22. Ozo nke nkpuru a hotara na-ata ahuhu; ọ na-atachi obi n'ọnọdụ Onye Kraịst, ọnọdụ nke Chineke, onye dere amara niile na onyinye ọ bụla na-eduga na ahụike, kpebisiri ike inye anyị otuto.
23. Na-ahụ ihe mgbu n'anya mgbe niile nke, na mgbakwunye na ọ bụ ọrụ nke amamihe Chineke, na-ekpughere anyị, kakwa mma, ọrụ nke ịhụnanya ya.
24. Ka uwa mekwaa onwe ya iwe tupu o taa ahụhụ, ebe o nweghi ihe ozo di ndu karie ime mmehie n’ime nka; uche gi, site n’enyemaka Chineke, ga-adi elu karie ihunanya Chineke ghaghi ada ada n’ime mmuo gi, ma oburu n’ileghara ekpere.
25. Aga m achọ ife kpọọ ihe niile e kere eke ka ha hụ Jizọs n'anya, hụ Meri n'anya.
26. Mgbe ebube mechara, St. Joseph! Mass na Rosary!
27. Ndụ bụ Calvary; mana ọ ka mma iji ọ happụ gbagoo. Obe nke obere bu nwunye nwanyi a mara mma ma ana m ekwo ekworo. Ahụhụ m na-ata na-atọ ụtọ. M na-ata ahụhụ naanị mgbe m na-anaghị ata ahụhụ.
28. Ahụhụ nke ajọ anụ arụ na nke omume bụ onyinye kachasị mma ị nwere ike inye onye zọpụtara anyị site na ịta ahụhụ.
29. Obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu na-eche na Onyenwe anyị na-eji mmesapụ aka elekọta mkpụrụ obi gị mgbe niile. Ama m na ị na-ata ahụhụ, mana ọ bụ na ịta ahụhụ apụtaghị na Chineke hụrụ gị n'anya? Ama m na ị na-ata ahụhụ, mana ọ bụghị nhụjuanya a bụ akara ngosipụta nke mkpụrụ obi ọ bụla ahọrọworo Chineke na Chineke a kpọgidere n'obe maka òkè na nketa ya. Ama m na mmụọ gị na-eyiri mgbe ọ bụla n’ọchịchịrị nke ọnwụnwa, mana ezuru gị, ezi nwa m nwanyị, ịmara na Jizọs nọnyeere gị na gị.
30. Kpuchie n'akpa uwe gị na aka gị!
Nwanyi di na Maria,
Nna nke Obi Nwa Jisụ,
kpee ekpere maka anyị.
1. Muo Nso ekwughi anyi na ka nkpuru obi biarute Chineke aghagh i idozi onwe ya maka onwunwa? Ya mere, nwe obi ike, ezi ada m; lụ ọgụ ọgụ, ị ga - enweta ihe nrite maka mkpụrụ obi siri ike.
2. Emechara Pater, Ave Maria bụ ekpere kachasị mara mma.
3. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-anaghị akwụwa aka ọtọ! Ọ bụghị naanị na ha ga-atụfu nkwanye ùgwù mmadụ niile, mana ole ha enweghị ike ijide ọfịs obodo ọ bụla ... Ya mere, anyị na-akwụwa aka ọtọ mgbe niile, na-agbaso echiche ọjọọ niile n'uche anyị, anyị na-echekwa obi anyị mgbe niile na Chineke, Onye kere anyị ma debe anyị n'ụwa ịmata ya. hu ya n'anya na ijere ya ozi na ndu a ma nwe ya obi uto ebighi ebi.
4. Ama m na Onyenwe anyị kwere ka ekwensu wakpo ekwensu n'ihi na ebere ya mere gi ka ị hụ ya n'anya ma chọọ ka ị yie ya na nchekasị nke ọzara, nke ubi, na nke obe; kama ị ga-echekwa onwe gị site na ịhapụ ịhapụ gị, wee leda anya okwu ọjọọ ya n'aha Chineke na nrube isi dị nsọ.
5. Lezie anya nke ọma: ma ọ bụrụ na ọnwụnwa ahụ agaghị ewute gị, ọ nweghị ihe ị ga-atụ egwu. Mana gịnị kpatara ụta ji ewute gị, ọ bụrụ na ị chọghị ịnụ ihe ya?
Ọnwụnwa ndị a dị oke njọ na-esite n'aka ajọ ekwensu, mana uju na ahụhụ anyị na-ata ahụhụ sitere na ebere nke Chineke, onye, ​​na-emegide uche nke onye iro anyị, na-ewepụ obi ọjọọ ya site na nke o ji sachapụ ndị ọla edo ọ chọrọ itinye n’ime akụ ya.
A na m ekwu ọzọ: ọnwụnwa gị bụ nke ekwensu na ala mmụọ, mana ihe mgbu gị na nhụjuanya gị bụ nke Chineke na nke elu-igwe; Ndi nne sitere na Babilon, ma umu-ndinyom siri na Jerusalem puta. Ọ na-eleda ọnwụnwa anya ma nabata mkpagbu.
Ee e, mba, nwa m nwanyị, mee ka ikuku fee ma echekwala na ịda ụda nke akwụkwọ bụ ụda ngwa agha.
6. Agbalịla imeri ọnwụnwa gị n'ihi na mbọ a ga - ewusi ha ike; ileda ha anya, egbochikwala imegide ha; na-anọchi anya n’echiche gị Jizọs Kraịst kpọgidere n’oche gị na n’obi gị, ma na-amakụ akụkụ ya ọtụtụ ugboro: Lee olileanya m, nke a bụ isi iyi nke obi ụtọ m! Aga m ejide gị aka, O Jesu m, agaghị m ahapụ gị ruo mgbe i tinyere m n’ebe nchekwa.
7. Mechie ugha ojoo ndia. Cheta na obughi obi mmadu a gha eme ka ikpe mara gi, kama ikwenye n'echiche di otu a. Naanị nnwere onwe ime nhọrọ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ma mgbe uche Jehova suru uda n’ule nke ọnwunwa ma ghara igosi ihe eweputara ya, obughi naani enweghi nsogbu, kama odi ike.
8. Ọnwụnwa anaghị eme ka ike gwụ gị; ha b ihe them proofm of banyere mkp soulr thatobi na Chineke ch tor experience inweta mgbe sees h itr it ya site n'ike nke odi mkpa iji sustain nogide agha ma jiri own jiri aka ya mee reatcha nke ebube.
Ruo ugbu a ndụ gị ka dị obere; ugbua Onye nwe anyi choro imere gi okenye. Ma ebe nyocha nke ndụ okenye dị elu karịa nke nwa ọhụrụ, ọ bụ ya mere i jiri buru ụzọ ghazie onwe gị; mana ndụ mkpụrụ obi ga-enweta nkwụsi ike ya na udo gị ga-alaghachi, ọ gaghị anọ ọdụ. Nwee obere ndidi; ihe niile ga-adịrị gị mma.
9. Ọnwụnwa megide okwukwe na ịdị ọcha bụ arịa nke ndị iro nyere, mana atụkwala ya egwu ma ọ bụrụ na nlelị. Ruo oge o tiri mkpu, ọ bụ ihe ama na-egosi na ọ nweteghị ikike ahụ.
Agaghị emekpa gị ahụ ihe ị na-ahụ n'akụkụ mmụọ ozi nnupu isi a; uche gị na - emegide echiche ya mgbe niile, ma na - ebi nwayọ, n'ihi na enweghi mmejọ, kama ọ bụ uche Chineke na uru maka mkpụrụ obi gị.
10. must ga-enwerịrị inyeghachi ya ihe mwakpo nke onye iro, ị ga-ele anya ya, ị ga-atụkwa anya ọfụma n'aka ya. Ejila obi ala kwusi ihe ndi iro na ewetara gi. Cheta na onye obula gbara oso gba oso; I ji nkwaghari ndi mbu imechu ndi ahu ka ha wepu echiche ha ma juo Chukwu. N’ikpere ya ikpere n’ala wee jiri obi ume ala megharia ekpere a: “Meere m ebere, onye m bu oria dara ogbenye”. Bili ọtọ ma n’enwe echiche dị nsọ gaa n’ihu n’ọrụ gị.
11. Buru n’uche na ka mwakpo ndi iro na-etolite, Chineke di nso karie nkpuru obi. Chee echiche ma tugharia uche nke a ma na eziokwu na - akasi obi.
12. Nwee obi ma ghara ịtụ egwu oge ọchịchịrị Lucifer. Cheta nke a rue mgbe ebighi ebi: na ọ bụ ezigbo akara mgbe onye iro na-ebigbọ ma na-ebigbọ ihe ị chọrọ, ebe nke a na-egosi na ọ nọghị n'ime.
Nwee obi ike, ada m! Eji m oke mmụọ kwuopụta okwu a, na Jizọs, jiri obi ike kwuo, m na-ekwu: ọ dịghị mkpa ịtụ egwu, ebe anyị nwere ike ikwu na mkpebi, n'agbanyeghị na enweghị mmụọ: Bie ndụ Jesus!
13. Buru n’uche na ka nkpuru obi na-abu ihe na-atọ Chineke ụtọ, a ga-enyochakwu ya. Nwee obi ike ma gaa n'ihu.
14. Aghọtara m na ọnwụnwa dị ka ọnaghị arụ kama ime ka mmụọ dị ọcha, mana ka anyị nụ ihe asụsụ ndị nsọ dị, ma na nke a, ịchọrọ ịma, n'etiti ọtụtụ, ihe St. Francis de Ahịa kwuru: na ọnwụnwa dị ka ncha, nke juputara n’elu uwe yiri ka ọ na-echicha ha ma n’ezie mee ka ha dị ọcha.
15. M tụkwasịrị gị obi mgbe niile; ọnweghị ịtụ egwu mkpụrụ obi tụkwasịrị Onyenwe ya obi ma tụkwasị ya obi. Onye iro nke ahụ ike anyị nọkwa anyị gburugburu oge niile ịghapụ arịlịka nke kwesịrị iduga anyị na nzọpụta, a na m atụkwasị obi na Chineke bụ Nna anyị; jidesie ike, jigide arịlịka a, ekwela ka ọ hapụ anyị obere oge, ma ọ bụghị na ihe niile ga-efu.
16. Anyị na-abawanye na ntinye-obi anyị n’ebe Nwanyị anyị nọ, ka anyị sọpụrụ ya na ezi ihunanya n’ụzọ niile.
17. Oh, obi a happinessụrị na ọgụ ime mmụọ! Naanị m chọrọ ịmara mgbe niile ị ga - alụ ọgụ iji wee nwee mmeri.
18. Jiri nwayọ jee ije n'ụzọ nke Onye-nwe-ayị ma emebighi mmụọ gị.
You ga-akpọ ntụpọ gị asị, mana ịkpọasị dị nwayọ ma ghara iwe iwe na enweghị nsogbu.
19. Nkwupụta, nke bụ ịsa ahụ mkpụrụ obi, a ga-emerịrị ụbọchị asatọ ọ bụla; Ọ na-adị m ka ị napụrụ ndị mmadụ mmehie ha ihe karịrị ụbọchị asatọ.
20. ekwensu nwere naanị uzo iji banye na nkpuru obi anyi: uche; enweghị ọnụ ụzọ nzuzo.
Onweghi mmehie dị otua ma ọbụrụ na emeghị ya. Mgbe uche adịghị ihe metụtara mmehie, o nweghị ihe metụtara adịghị ike mmadụ.
21. ekwensu yiri nkịta na-ewe iwe n’elu agbụ; Ọ pụghị ịgabiga onye ọ bụla ókè.
You na-anọkwa ebe ahụ pụọ. Ọ bụrụ n’ịbịaru nso, ị ga-ejide gị.
22. Ahapula nkpuru obi gi n’ime ọnwụnwa, ka Mmuo a kwuru, ebe o bu na obi uto bu ndu nkpuru obi, o bu ezi odidi nsọ. ebe nkụda mmụọ bụ nwayọ ọnwụ nke mkpụrụ obi na enweghị uru ọ bụla.
23. Onye iro anyị, gbara anyị mgba, na-esikwa ike n’ebe ndị na-adịghị ike nọ, ma onye ọ bụla zutere ya ọgụ ya n’aka, ọ ga-abụ onye ụjọ.
24. O di nwute, ndi iro ga na ano n’agha anyi mgbe niile, mana ka anyi cheta n’agbanyeghi na Virgin na-eche anyi. Yabụ ka anyị mee ka onwe anyị mara ya, tụgharịa uche na ya, anyị ji n'aka na mmeri bụ nke ndị tụkwasịrị nne a ukwu.
25. O buru na ijiri merie ọnwụnwa a, na - enwe nsonaazụ nke lye nwere na ebe a na - asa akwa.
26. Aga m ata ahụhụ n’ọnwụ ọtụtụ, tupu mụ ejiri anya m mejọe Onyenwe anyị.
27. Site n ’echiche na nkwupụta mmadụ agaghị alaghachi na mmehie eboro nkwupụta ndị gara aga. N'ihi nchegharị anyị, Jizọs gbaghaara ha n'ụlọ mkpọrọ. N’ebe ahụ, ọ hụrụ onwe ya n’ihu anyị na nsogbu anyị dị ka onye ji ya ụgwọ n’ihu onye ji ụgwọ ji ụgwọ. Site n'imesi mmesapụ aka na-enweghị nsọpụrụ, ọ dọwara, bibie ndetu nke okwu ndị a bịanyere aka na ya site n'imehie, nke anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ na-enweghị enyemaka nke ịdị nsọ ya. Backlaghachi na mmejọ ndị ahụ, na-achọ ịkpọlite ​​ha naanị ka nwere mgbaghara, naanị maka inwe obi abụọ na ewezugaghị ha, agaghị enwe ike ilele anya dị ka omume ntụkwasị obi maka ịdị mma nke o gosipụtara, na-adọgbu onwe ya aha banyere ụgwọ nke anyị butere site na imehie?… Laghachi, ọ bụrụ na nke a nwere ike bụrụ ihe nkasi obi nye mkpụrụ obi anyị, ka echiche gị tụgharịa gaa na mmejọ nke a na-ewetara ikpe ziri ezi, amamihe, na ebere nke enweghị ngwụcha nke Chineke: kama ọ bụ naanị ịkwaa ákwá maka ha. anya mgbapụta nke nchegharị na ịhụnanya.
28. N’ebe ọgba aghara na ihe ọjọọ dị iche iche, olileanya dị mma maka ebere ya na-enweghị atụ kwagide anyị: anyị ji obi ike gbaba n’ụlọ ikpe nke penance, ebe ya na nchegbu nna na-eche anyị oge niile; na, n’anyị maara banyere ịdị ọcha anyị n’ihu ya, anyị anaghị enwe obi abụọ mgbaghara mmehie dị ukwu nke ekwuputara njehie anyị. Anyị tinye ha, dịka Onye-nwe debere ya, bụ oke ili!
29. Jeghari ijeghari n'obi, were ezi obi na nke meghere emeghe karie ka ikere gi, ma mgbe cannot na enweghi ike joynwe omuma di nsọ a mgbe nile, ghara inwe obi ike na ntụkwasị obi n’ime Chineke
30. Ọnwụnwa nke Onye-nwe n’enye ga-edo onwe ya n’okpuru unu bụcha akara nke obi ụtọ na ihe bara ụba maka mkpụrụ obi. Onye m hụrụ n'anya, oge oyi ga-agafe, yana oge mgbụsị akwụkwọ ga-ejupụta karịa mara mma, oke ikuku ga-emebisị ike.
1. Mgbe anyị na-aga n’ihu onyinyo nke Madonna, anyị ga-asị:
«Ana m ekele gị, ma ọ bụ Maria.
si m ”.
Ndi Ave Maria
2. Gee ntị, Mama, ahụrụ m gị n'anya karịa ihe niile e kere eke nke ụwa na elu igwe ... mgbe Jizọs mechara, mana m hụrụ gị n'anya.
3. Mama m mara mma, ezigbo mama m, ee, ị mara mma. O buru na enweghi okwukwe, umu nwoke ga akpo gi chi. Anya gị na-enwu gbaa karịa anwụ; ị mara mma, mama, a na m anya isi na ya, ahụrụ m gị n'anya. Deh! nyere m aka.
4. Na Mee, kwuo ọtụtụ Ave Maria!
5. Umu m, huru ndi Ave Maria n'anya!
6. Ka Meri bụrụ ihe kpatara ịdị adị gị ma duzie onwe gị n'ọdụ ụgbọ mmiri nchekwa nke ahụike ebighebi. Ka ọ bụrụ ihe nlere gị anya ma bụrụ onye na - akpali mmụọ na ịdị nsọ nke ịdị nsọ.
7. Mary, nne di nma nke ndi nchu aja, onye ogbugbo na onye n’eme ka ihe oma nile di uku, site n’ala ala obi m, a na m ario gi, biko, m juo taa, echi, Jisos, nkpuru nke afọ gi.
8. Mama m, ahụrụ m gị n'anya. Chebe m!
9. Ahapula ebe-ichu-aja n’enweghi anya mmiri nke ihe mgbu na ihunanya n’ebe Jisos no, akpogidere gi aru ike.
Nwanyị nwanyị nke Mamiọta ga - enyere gị aka ịnọnyere ma nwee ume mmụọ nsọ.
10. Emela obi gị niile maka ọrụ Mata chefuru ịgbachi nkịtị ma ọ bụ gbahapụ Meri. Ka Nwa agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke, onye na-emechi ọkwa abụọ a nke ọma, bụrụ ezigbo ihe nlereanya na mmụọ nsọ.
11. Maria bulie aru gi nma ma mee ya obi uto ma tinye ya aka n’isi.
Jisie nne na nwanyị ahụ ike nso, n’ihi na ọ bụ oke osimiri nke ị ga-eji ruo n’iru oke ebube ebighi-ebi n’alaeze nke chi ọbụbọ.
12. Cheta ihe mere n’obi nne anyị nke bi n’elu obe. Egwu jidere ya n’iru Ọkpara ahụ a kpọgburu n’elu ya maka nnwapụta nke ihe mgbu, mana ị nweghị ike ikwu na ọ bụ ya gbahapụrụ ya. N’ezie, olee mgbe ọ hụrụ ya n’anya karịa mgbe ahụ ọ tara ahụhụ ma gharakwa ibe ákwá?
13. Gịnị ka ụmụ gị kwesịrị ime?
- Hụ Madonna n'anya.
14. Kpee ekpere maka Rosary! Jiri okpueze soro gị mgbe niile!
Ayi n’etughari uche na baptism nke baptism dicha nma nke olu aka anyi n’eji emuputa nne anyi di aso, n’etinye onwe anyi n’onye na-amata Chineke, ima ya nma, ijere ya ozi na ihu ya n’anya.
16. Nne m, n’ime m ịhụnanya dị n’ọkụ n’ime obi gị maka ya, n’ime m nke kpuchiri ọtụtụ ihe, na-enwe mmasị n’ime gị ihe omimi nke nnabata gị, na achọsiri m ike na ya mere i mee ka obi m dị ọcha. ịhụ m na Chineke gị n’anya, mee ka obi dị ọcha bilite n’ebe ọ nọ ma tụgharịa uche na ya, fee ya ofufe ma jeere ya ozi na mmụọ na n’ezie, sachapụ anụ ahụ nke mere na ọ ga-abụ ụlọikwuu ya erughị eru inweta ya, mgbe ọ ga-abata n’inwe udo.
17. Aga m achọ inwe nnukwu olu dị otú ahụ ịkpọ ndị mmehie si n'akụkụ ụwa niile ka ha bịa hụ Nwanyị nwanyị anyị. Mana ebe nke a adịghị n'ike m, m kpere ekpere, m ga-ekpekwa obere mmụọ ozi m ka ọ rụọ ọrụ m.
18. Obi dị ụtọ nke Meri,
bụrụ nzọpụta nke mkpụrụ obi m!
19. Mgbe arịgoro Jizọs Kraịst rịgoro n'eluigwe, Meri na-agba ọkụ mgbe niile n'ọchịchọ kachasi ike ka ya na ya wee dịghachi n'otu. Na-enweghị Ọkpara ya nke Chineke, ọ dị ka ọ nọ na ndọrọ n'agha kachasị sie ike.
Afọ ndị ahụ ọ ga-ekewasị ya ka ha bụ maka ya nwụrụ n'ihi egbughị oge ma ọ bụ ihe mgbu na-egbu mgbu, okwukwe nke ịhụnanya riri ya nwayọ.
20. Jizọs, onye chịburu n'eluigwe na oke mmadụ dị nsọ nke o weghaara n'ụmụ nwanyị na-amaghị nwoke, chọrọ nne ya ọ bụghị naanị na mkpụrụ obi ya, kamakwa ahụ ya nke ọma izute ya na iketa nsọpụrụ ya n'ụzọ zuru ezu.
Nke a ziri ezi ma bụrụkwa eziokwu. Ahụ ahụ nke na-abụbeghị ohu ekwensu na mmehie n'otu ntabi anya agaghị abụ ire ure.
21. Gbalia ime ka uche Chineke bụrụ oge niile na ihe niile ị na - eme, atụkwala ụjọ. Conkpụrụ a bụ ụzọ a ga-esi ruo eluigwe.
22. Nna, kuziere m ụzọ mkpirisi iji bịakwute Chineke.
- cutzọ mkpirisi ahụ bụ Virgin.
23. Nna, mgbe m na-ekwu Rosary, ekwesịrị m ịkpachara anya maka Ave ma ọ bụ ihe omimi ahụ?
- N’Ave, kelee Madonna n’ihe omimi nke ị na-eche.
A ga-etinyerịrị uche na Ave, na ekele ị na-agwa Virgin na ihe omimi ị na-eche. N’ebe omimi ya nile dikwa, nye ndi nile o jiri ihunanya na ihe mgbu soro.
24. Na-ebu ya mgbe niile (okpueze nke Rosary). Kwuo ma ọ dịkarịa ala osisi ise kwa ụbọchị.
25. Were ya mgbe nile n’akpa gị; n'oge ịchọrọ, jide ya n'aka gị, mgbe ị na-eziga ka ị saa akwa gị, chefuo iwepu obere akpa gị, mana echefula okpueze ahụ!
26. Nwa m nwanyị, kwuo Rosary mgbe niile. Site n'ịdị umeala n’obi, jiri ịhụnanya, were nwayọ.
27. Science, nwa m, n'agbanyeghị oke, bụ ihe na-adịghị mma mgbe niile; ọ bụ ihe na-enweghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ihe omimi nzuzo nke Chi.
Wayszọ ndị ọzọ ị ga - esi debe ya. Ghichaa obi gi n ’udiri nile nke uwa, wedaa onwe gi n’ala ma n’ekpe ekpere! Yabụ ị ga - achọta Chukwu, onye ga - enye gị udo na udo na ndụ a yana ọ eternalụ ebighi ebi na nke ọzọ.
28. you hụrụla ọka wit ka juru eju? Ga-ahụ na ntị ụfọdụ toro ogologo ma maa mma; ndị ọzọ, agbanyeghị, agbadoro n’elu ala. Gbalịa iwere ndị dị elu, nke kachasị na-enweghị isi, ị ga-ahụ na ndị a bụ ihe efu; ma ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ị na-ewere nke kachasị dị ala, nke kacha dịrị umeala n'obi, ndị a jupụtara agwa. Site na nke a ị nwere ike iwepu na ihe efu efu.
29. Oh Chukwu! mee ka obi gị jupụta n’ọkpụkpụ obi m ma mezue ọrụ ị malitere. A na m anụ olu na-agwa m nke ọma: doo ya nsọ. Odi nma, m choro, m choro ya, mana amaghi ebe m ga - ebido. Nyere m aka; Ama m na Jizọs hụrụ gị n’anya nke ukwuu, ị makwara ya. Ya mere gwa m okwu maka m, ka o nye m amara nke ịbụ nwa na - erughị eru nke St. Francis, onye nwere ike ịbụụrụ ụmụnne m nwoke ihe atụ ka mmụọ na-aga n'ihu ma na-etowanye n'ime m iji mee ka m bụrụ cappuccino zuru oke.
30. Ya mere kwesiri ntukwasi-obi mgbe nile na Chineke na nkwa nke ekwere na ya ma echekwala uche maka ebum pụta ụwa. Mara na ndị nsọ ejirila ụwa na ụwa mee ihe ịkwa emo mgbe niile ma tinye ụwa na elu ya.
31. Kụziere ụmụ gị ka ha na-ekpe ekpere!
Iesu et Maria,
na vobis m tụkwasara obi!
1. Kwuo n'oge ụbọchị:
Obi m nke Jesus,
mee ka m hụkwuo gị n’anya.
2. Hụ Ave Maria n'anya nke ukwuu!
3. Jizọs, ị na-abịakwute m mgbe niile. Kedu ụdị nri m ga-enye gị? ... jiri ịhụnanya! Mana ihu n'anya m bu nke nzuzu. Jesu, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Mebere ịhụnanya m.
4. Jizọs na Meri, m tụkwasịrị gị obi!
5. Ka anyị cheta na Obi Jizọs kpọrọ anyị ọ bụghị naanị maka ido anyị nsọ, kamakwa maka nke mkpụrụ obi ndị ọzọ. Ọ chọrọ ka enyemaka ya na nzọpụta nke mkpụrụ obi.
6. Kedu ihe ọzọ m ga-agwa gị? Amara na udo nke Mmuo Nso dikwa n’etiti obi gi mgbe niile. Tinye obi a n’akụkụ nzọpụta nke Onye nzọpụta ma jikọta ya na eze nke obi anyị, onye nọ n’ime ha dị ka n’ocheeze ya iji nata nrube isi na nrube isi nke obi ndị ọzọ niile, si otu a na-emeghe ụzọ, ka onye ọ bụla wee nwee ike ịbịaru nso ka ịnwe oge niile na oge ọ bụla; mgbe nke gị ga-agwa ya okwu, echefula, nwa m nwanyị, ime ka o kwuo okwu banyere nkem, ka ebube ya na ịdị mma ya mee ka ọ dị mma, irubere ya isi, kwesị ntụkwasị obi, dịkwa obere karịa.
7. Agaghị eche ihe niile n’adịghị ike gị mana, site na ịmara onwe gị maka onye ị bụ, ị ga - esoro n’ezighi ezi nke gị nye Chineke, ị ga - atụkwasịkwa ya obi, were hapụ nwayọ n ’aka nke Nna nke Eluigwe, dịka nwatakịrị n’elu nne gị.
8. O buru na m nwere obi na enweghi ngwụcha, obi niile nke elu-igwe na ụwa, nke nne gị, ma ọ bụ Jizọs, ihe niile, m ga - enye ha ha!
9. Jesus m, ụtọ m, ịhụnanya m, ịhụnanya na-akwagide m.
10. Jesus, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu! ... abaghị uru ikwughachi ya, ahụrụ m gị n'anya, hụ gị n'anya, hụ gị n'anya! Naanị gị! ... naanị ito gị.
11. Mee ka obi Jizọs bụrụ ebe isi ihe na-agba ume gị niile dị.
12. Jizọs bụrụ onye oge niile, ọ na - enyere gị aka, ịkwado na ndụ gị!
13. Na nke a (okpueze nke Rosary) a na-emeri ọgụ.
14. Ọ bụrụgodi na ị mechara mmehie niile nke ụwa a, Jizọs na - ekwupụtakwa gị: a na-agbaghara ọtụtụ mmehie n'ihi na ị hụrụ n'anya nke ukwuu.
15. N’oge ọgba aghara na agụụ ihe ọjọọ, olileanya dị mma maka ebere ya na-enweghị ngwụcha na-akwado anyị. Anyị ji obi ike gbaba n'ụlọ ikpe nke penance, ebe ọ na-eche anyị mgbe niile; na, n’anyị maara na anyị adịghị n’ihu ya, anyị anaghị enwe obi abụọ na mgbaghara mmehie dị mkpa nke ekwuputara na njehie anyị. Anyị tinye ha, dịka Onye-nwe debere ya, bụ oke ili.
16. Obi nke Nna-ukwu Chineke anyị enweghị iwu kachasị mma karịa nke nesstọ, ịdị umeala na ọrụ ebere.
17. Jisos, uto nkem ... olee otu m gesi ebi n’enweghi gi? Mgbe nile bia, Jesu m, bia, naanị ihe m nwere bụ.
18. childrenmụ m, ọ naghị adịkarị oke ịkwado maka udo dị nsọ.
19. «Nna, a na m eche na erughị m oke udo. Erughị m eru inweta ya! ».
Azịza: «Ọ bụ eziokwu, anyị erughị eru inweta ụdị onyinye a; ma ọ bụ ihe ọzọ ịbịaru mmehie na-amaghị ama, onye ọzọ ekwesịghị ekwesi. Anyị niile erughị eru; kama obu onye choro anyi, o bu ya choro ya. Ka anyi wedata onwe anyi aka ma jiri obi anyi nile were ihunanya nata ya.
20. "Nna, gịnị mere ị ji akwa ákwá mgbe ị nata Jizọs na udo dị nsọ?". Azịza: "Ọ bụrụ na eka ji oke mkpu a:" I meghị ihe nwa agbọghọ na - amaghị nwoke ", na - ekwu maka mbịbị nke Okwu ahụ n'ime afọ nke Nnọgharị Ahụ, olee ihe a na - agaghị ekwu banyere anyị nhụsianya?! Mana Jizọs sịrị anyị: "Onye ọ bụla nke na-anaghị eri anụ ahụ m ma na-a drinkụ ọbara m agaghị enwe ndụ ebighị ebi"; wee were ezi ịhụnanya na egwu bịaruo nso udo nsọ. Ubochi nile bu nkwadebe na inye ekele maka nmekorita di nsọ. "
21. Ọ bụrụ n’agaghị ekwe ka ị nọrọ na-ekpe ekpere, ọgụgụ ihe, wdg, ogologo oge, mgbe ahụ ịdala mba. Ọ bụrụhaala ịnwere oriri Jesus n'ụtụtụ ọ bụla, ị ga-ewere onwe gị dị ka onye nwere nnukwu ihu ọma.
N'ehihie, mgbe anabataghị gị ime ihe ọ bụla, kpọọ Jizọs, ọbụlagodi n'ọrụ gị niile, na ịsụ ude nke mkpụrụ obi ọ ga-abịa mgbe niile ma sorokwa mkpụrụ obi dịrị n'otu site na amara ya na nke ya nsọ ịhụnanya.
Gbajie mmụọ nsọ n'ihu ụlọikwuu, mgbe ị nweghị ike ịga ahụ gị ebe ahụ, ị ​​ga - ahapụ mmụọ gị agụụ ike wee kwuo okwu ma kpee ekpere ma nabata Onye ahụ hụrụ n'anya karịa ka a ga-enye gị ya ịnata oriri nsọ.
22. Jizọs naanị nwere ike ịghọta ụdị ihe mgbu ọ bụ m, mgbe a na-akwadorị ihe mgbu Calvary n'ihu m. Ọ bụ n’otu aka ahụ na a na-enye Jizọs ahụnke ọ bụghị naanị site n’ịmere ya ebere n’ihe mgbu ya, mana mgbe ọ hụrụ mkpụrụ obi nke na-arịọ ya maka na ọ bụghị ngụgụ obi, kama ka e mee ya na-ekere òkè n’ihe mgbu ya.
23. Anaghị eji Mas.
24. Nzukọ nsọ ọ bụla, nke a na-ege ntị nke ọma na ntinye obi, na-amịpụta na mkpụrụ obi anyị ọmarịcha arụmọrụ, ebube ime mmụọ na akụnụba nke anyị onwe anyị amaghị. Maka nzube a, emela ego gị na-atụghị anya ya, chụọ ya aja wee gbagote Mass dị Nsọ.
Couldwa nwekwara ike ịwụ anwụ, mana ọ nweghị ike ịbụ enweghị Mass dị nsọ.
25. Na Sọnde, Mass na Rosary!
26. attendingga Masiri Nsọ mee ka okwukwe gi sie ike ma tugharia uche dika onye a na - echighari onwe ya nye gi ikpe ikpe ziri ezi nke Chineke mee ka obi ju ya obi.
Mgbe ahụ diri gị, ị na-ege ntị n'ọtụtụ. Mgbe ị na-arịa ọrịa, ma enweghị ike ịga ya, ị na-asị.
27. N’oge ndị a dị oke njọ nke okwukwe nwụrụ anwụ, nke enweghị mmeri, ụzọ kachasị mma iji zere onwe anyị pụọ na ọrịa na-efe efe nke gbara anyị gburugburu bụ iji nri Eucharistic a mee onwe anyị ike. Ndị na-ebi ndụ ọnwa na ọnwa enweghị ike inweta nke a ngwa ngwa n'enweghi afọ-ojuju nke Nwa Atụrụ Chineke.
28. M na-atụ aka, n'ihi na mgbịrịgba na-akpọ m ma na-agba m ume; m na-aga n’ presslọ Nzukọ, ebe nsọ, ebe mmanya dị nsọ nke ọbara mkpụrụ osisi vaịn ahụ dị ụtọ ma na-aga n’ihu mgbe niile, nke ọ bụ naanị ole na ole nwere afọ ojuju na-ekwe ka mmanya gbuwe ha. N'ebe ahụ - dịka ịmara, enweghị m ike ime ihe ọzọ - a ga m ewetara gị Nna nke eluigwe na njikọ nke Ọkpara ya, onye, ​​site n'aka onye m ji bụrụkwa nke gị n'ime Onyenwe anyị.
29. you hụrụ otutu nleda na ole sachale nke ụmụ mmadụ na-enyefe maka arụ nke Nwa Ya na Sakrament nke Lovehụnanya. Ọ dị anyị n'aka, ebe ọ bụ na site na ịdị mma nke Dinwenụ a họpụtara anyị na Nzukọ-nsọ ​​ya, dịka St Peter si kwuo, rue “ọkwa nchụ-aja” (1Pt 2,9), ọ dị anyị n'aka, ịgbachitere nsọpụrụ nke Nwa Atụrụ a kacha dị nro, oge niile. Achọkarị ihe gbasara mkpụrụ obi, ịgbachi nkịtị mgbe ọ bụla ọ bụ ajụjụ gbasara ihe mmadụ chọrọ ime.
30. Jisos, zoputa onye obula; M na-enye onwe m aja aja maka onye ọ bụla; wusie m ike, were obi a, jiri ịhụnanya gị jupụta ya ma nyezie m ihe ịchọrọ.
1. Chineke achọghị ka ị chọpụta mmetụta nke okwukwe, olile anya na ọrụ ebere, ma ọ bụ ka ọ tọọ gị ụtọ, ma ọ bụrụ na ezughi iji ya n'oge. Ewoo, obi dị anyị ezigbo ụtọ na onye nlekọta ya nke nọ n’eluigwe na-ejide anyị. Naanị ihe anyị ga - eme bụ na anyị ga - eme ya, ya bụ, iji hụ na ihe dị anyị n’anya bụ ka anyị hapụ ya aka ya na n’obi ya.
Ee e, Chineke m, achọghị m ọ enjoymentụ karịa okwukwe m, olile anya m, ọrụ ebere m, naanị ka m nwee ike ikwu n'eziokwu, n'agbanyeghị enweghị ụtọ na enweghị mmetụta, na ọ ka mma ịnwụ kama ịhapụ omume ọma ndị a.
2. Nye m ma debe okwukwe ahụ dị ndụ nke na-eme ka m kwere ma rụọ ọrụ maka ịhụnanya gị naanị. Ma nka bu onyinye mbu nke mu onwem n tonye gi, buru kwa ndi anakpo nsọ dicha n’ukwu gi, n’iru ikpere gi, ana m ekwuputara gi n’enweghi nkwanye ugwu mmadu n’ihu uwa dum maka ezi naani Chineke anyi.
3. Eji m obi ọma gọzie Chineke, Onye mere ka m mata ezi mkpụrụ obi n'ezie, akpọkwara m ha na mkpụrụ obi ha bụ ubi vaịn nke Chineke; olulu ahụ bụ okwukwe; ụlọ elu ahụ bụ olileanya; Mkpesa ahụ bụ ọrụ ebere; oke ya bu iwu Chukwu nke kewapu ha n’ebe umu umu abia no.
4. Okwukwe ahụ dị ndụ, nkwenye ahụ kpuru ìsì na ịrapara kpam kpam nye ikike nke Chineke bụ nke dị n’elu gị, nke a bụ ìhè nke tinyere ndị Chineke n’agha n'ọzara. Nke a bụ ìhè na-enwu mgbe niile na ebe dị elu nke mmụọ ọ bụla Nna nabatara. Nke a bụ ìhè mere ka ndị Magus na-efe Mesaya amụrụ. Nke a bụ kpakpando ahụ Belam buru amụma. Ọ bụ ọwa a nke na-eduzi ijeụkwụ nke mmụọ a tọgbọrọ n'efu.
Ìhè a na kpakpando a na ọwa a bụkwa ihe na-enye gị ike ndụ gị, na-eduzi nzọụkwụ gị ka ị ghara imebi; ha na-ewusi mmụọ gị ike na mmụọ nsọ Chineke ma na-enweghị mkpụrụ obi gị maara ha, ọ na-aga n’ihu ebighebi ebighi-ebi.
Hụghị ya ma ị ghọtaghị ya, mana ọ dịghị mkpa. Ọ dịghị ihe ị ga-ahụ ma ọ bụghị ọchịchịrị, mana ha abụghị ndị nke metụtara ụmụ mbibi, kama ha bụ ndị na-agba anyanwụ nke ebighi ebi. Guzosie ike ma kwere na Anyanwụ a na-enwu n'ime mkpụrụ obi gị; Anyanwụ a bụ kpọmkwem nke onye ọhụ ụzọ Chineke bụrụ: "N'igwe gị ka m ga-ahụ ìhè ahụ".
5. crekpụrụ okwukwe kachasị mma bụ nke si n'ọnụ gị gbupụ n'ọchịchịrị, ịchụ àjà, n'ihe mgbu, na oke mbọ nke uche na-adịghị agha agha maka ọdịmma; ọ bụ ihe ahụ, dị ka àmụmà, na-akụda ọchịchịrị nke mkpụrụ obi gị; obu na nke ahu, ma oburu na ebili mmiri nke oke nrachipu gi, duga gi nye Chineke.
6. Mee, nwa m nwanyị m hụrụ n'anya, otu ụdị ụtọ na ido onwe gị n'okpuru uche Chineke ọ bụghị naanị n'ihe ndị pụrụ iche, kamakwa n'obere ihe ndị na-eme kwa ụbọchị. Mee ọ bụghị nanị n'ụtụtụ, kamakwa n'ehihie na n'anyasị jiri mmụọ dị nwayọ na ọ joyụ; ọ bụrụkwa na ihe elezighi anya, wedata onwe gị ala, kwupụta ma bilie ọtọ gaa n'ihu.
7. Onye iro siri ike, ma gbakọọ ihe niile yiri ka mmeri ahụ kwesịrị ịchị ọchị onye iro ahụ. Ewoo, onye ga - azoputa m n’aka onye iro siri ike ma sie ike, onye n’adighi arapu m n’otu ntabi anya, ma obu abali? Ọ ga - ekwe omume na Onyenwe anyị ga - ekwe ka ọdịda m? Ọ dị nwute na ekwesịrị m ya, mana ọ ga-abụ eziokwu na ịdị mma nke Nna nke Eluigwe ga-emerịrị emeri m? Nna m agaghị eme nke a ma ọlị.
8. Ọ ga-amasị m ka e jiri m mma mma dụ gị mma, kama iwe onye ọzọ.
9. Chọọnụ ịnọ naanị gị, ee, ma gị na onye agbata obi gị echezọla ọrụ ebere.
10. Agaghị m anagide nkatọ na okwu ọjọọ nke ụmụnna. Ọ bụ eziokwu, mgbe ụfọdụ, ọ na-atọ m ụtọ ịkwa ha ọchị, mana ntamu na-eme ka m rịa ọrịa. Anyị nwere ọtụtụ ntụpọ iji katọọ n'ime anyị, gịnị kpatara anyị ga-eji nwute megide ụmụnna? Anyị onwe anyị, n’anyị enweghị ọrụ ebere, ga-emebi mgbọrọgwụ nke osisi nke ndụ, na nsogbu dị na ime ka ọ kpọọ nkụ.
11. Enweghị onyinye ebere dịka imerụ Chineke n’anya nwata anya ya.
Gịnị bụ ihe siri ike karịa nwa akwụkwọ nke anya?
Enweghị ebere dị ka imehie megide ihe ndị e kere eke.
12. Onyinye amara, ebe obula o siri bia, bu nwa nwanyi nke otu nne ya, ya bu, inye ihe.
13. Ọ dị m nwute na m hụrụ ka ị na-ata ahụhụ! Iwepu iru uju mmadu, o gaghi esiri m ike inweta obi! ... Ee, nke a ga - adi nfe!
14. Ebe enweghi nrube isi, odighi omume. Ebiet eti ido m ,dụhe, idụhe se ifọnde, idụhe ima ye unana ima eke Abasi m anddidụhe Abasi, m withoutdidụhe Abasi ikemeke ndika heaven.
Ndị a na-etolite dika ubube ma ọ bụrụ na steepụ steepụ efu, ọ dara.
15. Mee ihe niile maka otuto nke Chineke!
16. Gwa Rosary mgbe niile!
Kwu mgbe ihe omimi obula kwuru:
St. Joseph, kpee ekpere maka anyị!
17. A na m agba gị ume, maka ịdị nwayọ nke Jizọs na maka ebere nke Nna nke Eluigwe, mgbe ịla jụụ n'ụzọ ọma. Na-agba ọsọ oge niile na ị chọghị ịkwụsị, maka ịmara na n'ụzọ dị otu a ka ọ dị iji laghachi na nzọụkwụ gị.
18. Onyinye amara bụ ogige nke Onye-nwe ga-ekpe anyị niile ikpe.
19. Cheta na ihe banyere izu oke bụ ọrụ ebere; onye obula biri n’ime obi ebere na-ebi n’ime Chineke, n’ihi na Chukwu bu ebere, dika Onyeozi kwuru.
20. Ọ dị m nwute na ịmara na ị na-arịa ọrịa, mana enwere m ọ veryụ nke ukwuu ịmara na ị na-agbake ma na-akasị m ọ seeingụ ịhụ ezi nsọ na ọrụ ebere Ndị Kraịst gosipụtara n’arụ ahụ ike gị.
21. M na-agọzi Chineke ọma nke mmụọ nsọ nke nyere gị amara ya. Ọ ga-adị mma ma ị malite ịmalite ọrụ ọ bụla na-ebughị ụzọ rịọ maka enyemaka Chineke. Nke a ga-enweta amara nke ntachi obi dị nsọ nye gị.
22. Tupu atụgharị uche, kpesie ekpere Jizọs, Nwanyị nwanyị anyị na Saint Joseph ekpere.
23. Onyinye amara bụ eze nwanyị nke omume ọma. Dika otu ejikọtara ọnụ pọmrị ọnụ, otua ka omume ọma si na ebere. Ma lee, ọ bụrụ na eri ahụ gbajiri, oke pel ahụ dara; yabụ, ọ bụrụ na ọrụ furu efu, a chụgara omume ọma.
24. Ahụhụm ma taa ahụhụ; mana n'ihi ezi Jesus, a ka na-enwe m ike; gịnịkwa ka ihe ahụ e kere eke nke Jisọs na-enweghị ike?
25. Gbaanụ ọgụ, nwa nwanyị, mgbe ị gbasiri ike, ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ihe nrita nke mkpụrụ obi siri ike.
26. Ikwesiri inwe uche na ihunanya oge niile. Nganga nwere anya, ihu n’anya nwere ụkwụ. Lovehụnanya nke nwere ụkwụ ga-achọ ịgba ọsọ n’ebe Chineke nọ, mana mkpali ọ ga-eji ọsọ bịakwute ya kpuo ìsì, ma mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịsụ ngọngọ ma ọ bụrụ na iduzighi ya na anya ya. Nganga, mgbe ọ hụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ya achịghị ịhụnanya, ọ ga-ahụ ya n'anya.
27. Mfe nfe bụ omume ọma, agbanyeghị ruo n’otu isi okwu. Nke a agaghị adị akọ; N'aka nke ozo, aghụghọ na ezi uche bu ndi mmadu na eme ihe ojoo.
28. Vainglory bụ onye iro kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ obi ndị raara onwe ha nye Chineke na ndị nyefere onwe ha na ndụ ime mmụọ; n'ihi nkea enwere ike ịkpọ nla nke mkpụrụ obi na-ezukwa izuzu. Ndi nsọ na akpọ ya nku nsọ nke ịdị nsọ.
29. Ekwela ka nkpuru obi gi megharia ihe nlere nke nmegbu nke mmadu; nke a kwa, na aku na uba ihe, nwere uru ya. Ọ bụ na ya ka ị ga-ahụ mmeri ikpe nke ikpe ziri ezi nke Chineke otu ụbọchị!
30. Iji rata anyị, Dinwenụ na-enye anyị ọtụtụ amara ma anyị kwenyere na anyị ji mkpịsị aka metụ eluigwe. Ma ayi amataghi na iji tolite, achicha siri ike di anyi mkpa: obe n’azu, nleda anya, nnwale nke ya.
31. Obi ike ma na-emesapụ aka na-akwa ụta naanị maka nnukwu ebumnuche, ọbụlagodi na ebumnuche ndị a anaghị eme ka ha banye miri emi.
1. Na-ekpe ekpere nke ukwuu, na-ekpe ekpere mgbe niile.
2. Anyi na-arịọ Jesu anyị hụrụ n'anya maka ịdị umeala n'obi, ntụkwasị obi na okwukwe nke Saint Clare anyị hụrụ n'anya; dị ka anyị na-ekpesi ekpere ike na Jizọs, ka anyị hapụ onwe anyị nye ya site na ịhapụ onwe anyị site na ngwa agha ụgha nke ụwa ebe ihe niile bụ nzuzu na ihe efu, ihe niile na-agabiga, ọ bụ naanị Chineke ka dịịrị mkpụrụ obi ma ọ nwee ike ịhụ ya n'anya nke ọma.
3. Abụ m naanị onye ogbenye na-ekpe ekpere.
4. Abakwala la ụra n’ebughị ụzọ lelee mmata banyere etu i siri nọrọ n’ụbọchị ahụ, ọ bụghị tupu i duzi echiche gị niile nye Chineke, soro n’onyinye na ido onwe gị nsọ na mmadụ gị niile. Ndị Kraịst. Nyekwa gi otuto nke ebube ya kachasi nma ichoro ma echefula gi onye mmuo nche nke no mgbe nile.
5. Hụ Ave Maria n'anya!
6. N’oge na-aghaghi ịkwụsi ike na ndabere nke ikpé ziri ezi nke Onye Kraịst na ntọala nke ịdị mma, n’omume ọma, ya bụ, nke Jizọs gosipụtara n’ụzọ doro anya dị ka ihe nlere anya, m na-ekwu: ịdị umeala n’obi (Mt 11,29:XNUMX). Humilitydị umeala n'obi na nke mpụga, mana enwere ime karịa mpụga, enwere mmetụta karịa egosiputara, omimi karịa anya.
N’echebara echiche, nwa m nwanyị m hụrụ n’anya, onye ị bụ n’ezie: enweghị nhụsianya, nhụsianya, adịghị ike, isi iyi nke ajọ omume na-enweghị oke ma ọ bụ na-eleda anya, nwee ike ịgbanwe ezi ihe na ihe ọjọọ, ịhapụ ezi ihe maka ihe ọjọọ, iwere gị ihe ọma. ma ọ bụ guzosie ike n'ihe ọjọ na, n'ihi ajọ otu ihe ahụ, leda nke kachasi nma.
7. Ekwere m n’aka na ịchọrọ ịmara nke kachasị mma, na asị m gị ka ị bụrụ ndị anyị ahọpụtabeghị, ma ọ bụ ka anyị bụrụ ndị na-enweghị ekele maka anyị ma ọ bụ, itinye ya nke ọma, ndị anyị enweghị nnukwu mmasị; na, ka o doo anya, nke ọrụ na ọrụ anyị. Nye ga-enye m amara, ụmụ m nwanyị m hụrụ n'anya karịa, na anyị hụrụ nnanna anyị anya nke ọma? Ọ dịghị onye ọzọ nwere ike ime ya karịa onye hụrụ ya n'anya nke ukwuu nke chọrọ ịnwụ ka ọ debe ya. Ma na nke a zuru ezu.
8. Nna, kedu otu i si agụ Rosary?
- Kpee ekpere, kpee ekpere. Onye obula kpere ekpere kariri, a ga- azoputa ya, oleekwa ekpere karie ma nabata nke nwanyi karia ka ya onwe ya kuziri anyi.
9. Ezigbo obi obi bụ ihe a na-ahụ anya na ahụmịhe karịa egosipụta. Anyị ga-ewedata onwe anyị ala n’ihu Chineke, mana ọ bụghị n’iji umeala obi ụgha ahụ na-eduga n’inwe nkụda mmụọ, na-eweta obi nkoropụ na obi nkoropụ.
Anyi kwesiri inwe echiche di ala banyere onwe anyi. Kwere anyị dị ala karịa mmadụ niile. Edebela uru gị n'ihu nke ndị ọzọ.
10. Mgbe ị kwuru Rosary, sịnụ: "Saint Joseph, kpee ekpere maka anyị!".
11. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ndidi ma tachie obi ọjọọ nke ndị ọzọ, anyị niile ga na-atachi obi onwe anyị.
N’ụbọchị ị na-ekwenyeghị ekwesi, na-emechu mmadụ ihu, na-emechu ya ihu. Mgbe Jizọs hụrụ ka e wedara gị n’ala, ọ ga-esetịrị aka gị chee echiche n’onwe ya iji dọta gị n’ebe ya onwe ya nọ.
12. Ka anyị kpee ekpere, kpee ekpere, kpee ekpere!
13. Gini bu obi uto ma oburu na ichoghi idi nma? Ma, is nwetụla onye dị n'ụwa a nke nwere obi ụtọ zuru oke? Ọ bụghị n'ezie. Ọ bụrụ na mmadụ jupụtara na mmebi iwu, ya bụ, juputara na mmehie, ọ gaghị enwe obi ụtọ ọ bụla. Ya mere achota obi uto na elu igwe: odighi ihe ojoo tufue Chineke, nsogbu adighi, ma obu onwu, kama ino na ndu ebighebi gi na Jisos Kraist.
14. Obi umeala na obi ebere na-aga aka. Otu na-enye otuto ma nke ọzọ na-edo nsọ.
Humdị obi umeala na ịdị ọcha nke omume bụ nku nke na-eweli Chineke elu ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbibi.
15. Kwa ubochi Rosary!
16. Weda onwe gị ala mgbe niile n’ihu Chineke na mmadụ, n’ihi na Chineke na-agwa ndị na-edebe obi ya n’ezie ihu ya n’anya ma jiri onyinye ya mee ka ọgaranya ju ya.
17. Ka anyị burugodị ụzọ lebazie anya wee lee onwe anyị. Oghere na-enweghị njedebe n'etiti acha anụnụ anụnụ na abis na-eme ka ịdị umeala n'obi.
18. Ọ bụrụ na anyị kwụ ọtọ na anyị, na mbụ iku ume anyị ga-adaba n'aka ndị iro anyị dị mma. Anyị na-atụkwasị obi na nsọpụrụ Chineke mgbe niile, yabụ anyị ga-ahụ ọtụtụ na-ele ịdị mma nke Onye-nwe.
19. Kama, ị ga-eweda onwe gị ala n’ihu Chineke kama ịbụ onye ihe ga-eju eju ma ọ bụrụ na o debe ahụhụ ahụhụ nke Ọkpara ya maka gị, chọọkwa ka ị hụ adịghị ike gị; ị ga-eweliri ya ekpere maka ịgba arụkwaghịm na olile anya, mgbe mmadụ dara n'ihi adịghị ike, ma kelee ya maka ọtụtụ uru o ji enye gị aka.
20. Nna, I di nma!
- Adịghị m mma, naanị Jizọs dị mma. Amaghị m ụdị omume Saint Francis a m na-eyi anaghị agba ọsọ n'akụkụ m! Nkpukpo nke ikpe azu n'uwa bu ọla-edo dika mu.
21. Gini ka m ga - eme?
Ihe niile sitere na Chineke. Enwere m ọgaranya n'otu ihe, nhụsianya na-enweghị njedebe.
22. Mgbe ihe omimi ọ bụla: Saint Joseph, kpee ekpere maka anyị!
23. Lee ka ọtụtụ ihe ọjọọ si dị n’ime m!
- Nọrọ na nkwenye a, wedaa onwe gị ala mana ewela iwe.
24. Kpachara anya ka ike ghara ịgwụ gị ile onwe gị ka ọrịa ime mmụọ gbara gị gburugburu. Ọ bụrụ na Chineke kwere ka ị daba n'ihe adịghị ike, ọ bụghị ịhapụ gị, kama ọ bụ naanị idozi ịdị umeala n'obi ma mee ka ị nwekwuo mmasị maka ọdịnihu.
25. doeswa anaghị asọpụrụ anyị n'ihi ụmụ nke Chukwu; ka anyị kasie onwe anyị obi na, ọbụlagodi otu oge, ọ maara eziokwu ahụ ma ghara ikwu okwu ụgha.
26. Bụrụ onye hụrụ gị n'anya na ịdị mfe nghọta na ịdị umeala n'obi, echekwala ikpe nke ụwa, n'ihi na ọ bụrụ na ụwa a enweghị ihe ọ ga-ekwu megide anyị, anyị agaghị abụ ndị ohu Chineke n'ezie.
27. -hụ onwe ya n’anya, nwa mpako dị njọ karịa nne n’onwe ya.
28. Humdị umeala n’obi bụ eziokwu, eziokwu bụ ịdị umeala n’obi.
29. Chineke na-eme mmadụ mkpụrụ obi, nke na-ewepụ ihe niile.
30. Site n'ime uche nke ndi ozo, anyi aghaghi ime akuko nke ime uche Chineke, nke gosiputara anyi na ndi isi anyi na ndi agbata obi anyi.
31. Nọgide na ụlọ ụka Katọlik dị nsọ mgbe niile, n'ihi na ọ bụ naanị ya nwere ike inye gị ezi udo, n'ihi na ọ bụ naanị ya nwere Sakramental Jizọs, onye bụ ezigbo onye isi udo.
1. Anyị ga-ahụ n'anya, n'anya, n'anya na ihe ọ bụla ọzọ.
2. N'ime ihe abụọ, anyị ga na-arịọ Onye nwe anyị kachasị atọ ụtọ mgbe niile: onye na-abawanye ịhụnanya na egwu n'ime anyị, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-eme ka anyị fewe n'ụzọ Jehova, nke a ga-eme ka anyị lelee ebe anyị tinyere ụkwụ anyị; nke a na-eme ka anyị na-elele ihe nke ụwa maka ihe ha bụ, nke a na-eme ka anyị leghara nleghara anya ọ bụla anya. Mgbe ahụ ịhụnanya na egwu na-amakụ onwe ha, ọ nweghị ike anyị igosipụta mmetụta nke ihe dị n'okpuru.
3. Ọ bụrụ na Chukwu enyeghị gị obi uto na ịdị nwayọ, mgbe ahụ ị ga-enwerịrị ọerụ, na-enwe ntachi obi iri nri gị, agbanyeghị nke ọma, na-emezu ọrụ gị, n’enweghi ụgwọ ọrụ ugbu a. N'ime ime nke a, ịhụnanya anyị nwere n’ebe Chineke nọ enweghị ihe ọ bụla; aahyɛ yɛn ma yenya Onyankopɔn anim dom no ho anisɔ; nke a bụ n'ụzọ ziri ezi nke mkpụrụ obi kachasị mma.
4. Ka iwe iwe gị ju, ị ga-ahụkwu ịhụnanya.
5. Otu omume ịhụnanya nke Chukwu, nke emere n'oge nkụ, kwesiri ka ọ bụrụ otu narị, nke emere na nwayọ na ngụgụ obi.
6. N'elekere atọ, chee banyere Jizọs.
7. Obi nkem bu nke gi ... Jisos, were obi a, juo ihu-n'anya gi ma nye m ihe ichoro.
8. Udo bụ ịdị mfe nke mmụọ, ịdị nwayọ nke uche, ịdị jụụ nke mkpụrụ obi, nkekọ nke ịhụnanya. Udo dị n’usoro, ọ bụ nkwekọ n’ime anyị niile: ọ bụ ọ enjoymentụ na-aga n’ihu mgbe niile, nke a na-amụ site na akaebe nke ezi akọ na uche: ọ bụ ọ joyụ dị nsọ nke obi, nke Chineke na-achị ebe ahụ. Udo bu uzo izu oke, ana ahu izu oke na udo, ma ekwensu onye maara ihe ndia nile n’eme ka ike ju anyi obi.
9. childrenmụ m, ka anyị hụ n'anya ma kwuo Ekele Mary!
10. I turu Jisos, oku a nke i biara iweta n’elu uwa, ya mere na O gha n’iru gi n’ochu m n’elu ebe ihunanya gi, dika onyinye ihunanya nke ihunanya, n’ihi na Gi onwe gi bu eze n’ime obi m na n’obi mmadu niile, site na ka onye obula na ebe nile bulie ukwe otuto, nke ngozi, nke ekele diri gi maka ihunanya i gosiri anyi na ihe omimi nke omumu Gi.
11. Hụ Jizọs n'anya, hụ ya n'anya nke ukwuu, mana maka nke a, ọ hụrụ karịa ịchụ àjà n'anya. Ima ima iyat esịt.
12. Taa, nzukọ ụka nyere anyị oriri nke aha nsọ kacha nke Meri iji chetara anyị na anyị ga na-akpọ ya oge niile nke ndụ anyị, ọkacha n'oge awa nke ahụhụ, nke mere na o mepere anyị ọnụ ụzọ nke Eluigwe.
13. A na-eduga mmụọ nke mmadụ n’enweghi ire ọkụ nke ihunanya ya ruo n’ọkwa anụmanụ, ebe ọrụ ebere na-egosi, ịhụnanya nke Chineke na-ewelite ya elu wee ruo n’ocheeze Chineke. Site na ezigbo Nna dị mma ma na-ekpeku ya ekpere ka o mee ka ọrụ ebere ahụ dịkwuo ukwuu na obi gị.
14. I gaghi-eme mkpesa maka mmebi iwu a, ebe obula emere gi, n’icheta na obi ojoo ndi mmadu n’onwe ya ritetara site na Jisos.
Unu nile ga-arịọ mgbaghara maka ọmịiko nke ndị Kristian, na-edebe n’ihu anya gị ihe atụ nke Nna-ukwu nke Chukwu onye wepụrụ ngọrịọ n’iru Nna ya.
15. Ka anyị kpee ekpere: A na-echekwa ndị na-ekpe ekpere karị, ndị na-ekpe ekpere obere, amam ikpe. Anyị hụrụ ndị Madonna n'anya. Ka anyi mee ihunanya ya ma guo Rosary nke o kuziri anyi.
16. Na-eche mgbe niile maka Eluigwe.
17. Jizọs na mkpụrụ obi gị kwenyere ịkọ ubi vaịn ahụ. Ọ dịịrị gị ịwepụ na ibupụ okwute, ịkwaa ogwu. Nye Jizọs ọrụ ịgha mkpụrụ, ịkọ ihe, ịkọ ihe, mmiri. Ma obu ezie na oru gi, odi oru nke Jisos, n’enweghi ya, odighi ihe ị puru ime.
18. Iji zere asịrị ndị Farisii mere, iwu agaghị agwa anyị ka anyị zere ezi.
19. Cheta: onye nmebi iwu nke neme ihe ọjọ kari ikpere Chineke nso karie ka onye ezi omume n’agha na ime ihe oma.
20. Oge adịghị mma maka otuto nke Chineke na maka ahụ ike nke mkpụrụ obi adabaghị emebi.
21. Ya mere, Bilie, O Onye-nwe, ma gosi n’egosiputa obi-gi nke I nyefeworo m n’aka, ekwekwala ka onye obula tufuo onwe ha site na ihapu igwe aturu. O Chukwu! O Chukwu! ekwela ka ihe-nketa-gi mebie emebi.
22. Ikpe ekpere nke ọma abụghị igbu oge!
23. abu m nke onye obula. Onye ọ bụla nwere ike ịsị: "Padre Pio bụ nke m." Ahuru m umunne m ndi jee biri n’ala ozo n’anya. Ahụrụ m ụmụ ime mmụọ m n'anya dị ka mkpụrụ obi m na karịa. Edegoro m ha Jizọs na mgbu na ịhụnanya. Enwere m ike ichefu onwe m, mana ọ bụghị ụmụ ime mmụọ m, n'ezie ana m emesi gị obi ike na mgbe Chineke kpọrọ m, m ga-asị ya: «Onyenwe m, m na-anọ n'ọnụ ụzọ nke Eluigwe; Abatara m gi mgbe m hụrụ nke ikpeazụ ụmụ m ka ha na-abanye ».
Anyị na-ekpe ekpere n’ụtụtụ ma na mgbede.
24. Otu na-achọ Chukwu n’ime akwụkwọ, a na-ahụ ya n’ekpere.
25. Hụ ndị Ave Maria na Rosary n'anya.
26. Obi dị Chineke ụtọ na ụmụ anụmanụ ndị a na-ezighi ezi chegharịa ma laghachikwute ya n'ezie!
Maka ndị a, anyị niile ga-abụrịrị nne, na ndị a, anyị ga-enwerịrị ezigbo nlekọta, ebe Jizọs mere ka anyị mara na n'eluigwe, a na-eme ememme maka onye mmehie chegharịrịnụ karịa ntachi obi nke ndị ezi omume iri itoolu na iteghete.
Ikpe a nke Onye Mgbapụta na-akasi obi n'ezie maka ọtụtụ mkpụrụ obi ndị mere mmehie dị njọ ma chọọ ịchigharị ma laghachikwute Jizọs.
27. Mee ihe oma ebe obula, ka mmadu obula wee kwuo:
"Onye a bụ nwa Kraist."
Nwee mkpagbu, nsogbu, ịda mba maka ịhụ Chineke n'anya na ntụgharị nke ndị mmehie dara ogbenye. Gosi onye n thenweghi ike, kasie ndi nākwa ákwá obi.
28. Echegbula onwe gị gbasara izu ohi m, ebe ọ bụ na etinyere oge kachasị mma iji dozie mkpụrụ obi ndị ọzọ, enweghịkwa m ụzọ isi kelee Nna nke Eluigwe dịka ọ na-enye m mkpụrụ obi m ga - enyere aka n'ụzọ ụfọdụ .
29. O di ebube ma sie ike
Onyebuchi San Michele,
diri ndu na onwu
Onye n'echebe m.
30. Echiche nke ịbọ ọ́bọ̀ abatabeghi na obi m: Ekpeere m ekpere maka ndị na - echichaa ya ma m na - ekpe. Y’oburu na mgbe m kwuru Onye-nwe mgbe ufodu: “onye nweayi, oburu igbanwe ha, odi nkpa ume, site na ndi nile di ocha.
1. Mgbe ị na-agụ Rosary mgbe ebube dị ịsị: «Saint Joseph, kpee ekpere maka anyị!».
2. Ije ije n'ụzọ dị mfe n'ụzọ nke Onyenwe anyị ma a gaghị emekpa mmụọ gị mmụọ. You ga-akpọ mmejọ gị asị mana jiri ịkpọasị dị nwayọ ma ghara iwe iwe na enweghị ike; o di nkpa inwe ndidi na ha ma jiri ha di ala. Na enweghị ndidi dị otú ahụ, ezigbo ụmụ m nwanyị, ezughị okè unu, kama ịnọ na-achọ, na-eto karịa, ebe ọ nweghị ihe na-azụlite ma anyị enweghị ntụpọ yana enweghị ike na enweghị nchebara echiche ịchọ iwepu ha.
3. Kpachara anya maka nchekasị na nchegbu, maka na onweghị ihe na-egbochi ije ije izu oke. Nwa m nwanyi, jiri nwayọ meghe obi gị n ’ọnya nke Onyenwe anyị, mana ọbụghị n’iji ogwe aka. Nwee obi ike na ebere ya na ịdị mma ya, na ọ gaghị ahapụ gị, mana ekwela ka ọ nabata obe nsọ ya maka nke a.
4. Echegbula onwe gị mgbe ị na-enweghị ike ịtụgharị uche, enweghị ike ikwukọrịta na enweghị ike ịga omume niile na-asọpụrụ Chineke. Ka ọ dị ugbu a, gbalịanụ ime ihe maka ya n'ụzọ dị iche site n'ime ka gị na Onye-nwe-anyị jiri uche ima, na ikpe ekpere, na imekọ ihe ọnụ.
5. Wepu ọgba aghara na nchekasị oge niile ma nwee ọ painụ ihe mgbu nke Onye Ọ Hụrụ n'Anya n'udo.
6. N'ime Rosary, Nwaanyị anyị na-ekpekọ ekpere.
7. Hụ Madonna n'anya. Tinye Rosary Were ya nke ọma.
8. Enwere m obi obi jọrọ njọ mgbe m hụrụ ahụhụ gị, amataghịkwa m ihe m ga - eme ịhụ ka obi erutụ gị ala. Mana gịnị kpatara iwe ji ewe gị? gini mere oji agu gi? Nwa m nwanyị, ahụbeghị m ka ị na-enye Jizọs ọtụtụ ihe ịchọ mma dị ka ugbu a. Ahụtụbeghị m gị hụrụ n'anya n'anya ka Jizọs. Yabụ kedu ihe ị na-atụ egwu ya ma na-ama jijiji? Egwu gi na ima jijiji gi di ka umuaka nke no n’aja nne ya. Yabụ nke a bụ nzuzu na ụjọ na-enweghị isi.
9. Karịsịa, enweghị m ihe ọ bụla ị ga - anwale ọzọ n’ime gị, ewezuga mkpasu iwe a na - adịghị mma n’ime gị, nke na - agaghị eme ka ị nụrụ ụtọ uto niile nke obe. Ghazigharịa ihe maka nke a ma gaa n’ihu ime dịka i mere ruo ugbu a.
10. Yabụ biko echegbula onwe m maka ihe m na aga, aga m ata ahụhụ, maka nhụjuanya, n'agbanyeghị etu ọ dị, eche ihu ọma anyị na - eche mkpụrụ obi.
11. Maka mmụọ gị, dị nwayọ nwayọ ma tụkwasịnụ Jizọs obi gị niile. Gbalịsie ike ka ị na-eme onwe gị oge niile na uche Chineke, ma n'ihe ọma ma n'ihe ọjọọ, ma asịkwala maka echi.
12. Atụla ụjọ na mmụọ gị: ha bụ njakịrị, ịkọ ọdịnihu na ule nke Onye Ọchịchị nke Eluigwe, onye chọrọ ime ka ị nọrọ n'akụkụ ya. Jizọs na - elebara anya na ezi agụụ nke mkpụrụ obi gị, nke dị oke mma, ọ na - anabata ya ma na - akwụghachi gị ụgwọ, ọ bụghị enweghị ike gị na enweghị ike gị. Ya mere echegbula.
13. Ekwekwala ka ihe gha gi obi gi na nsogbu gi. Naanị otu ihe dị mkpa: bulie mmụọ nsọ ma hụ Chineke n'anya.
14. I nwute, ezigbo nwa m nwanyị, chọọ kachasi mma. Mana, n’eziokwu, ọ dị n’ime gị ọ na - eme ka ị gbasaa n’elu obe gba ọtọ, na - eku ume iji jigide ọnwụ nwụrụ anwụ na - ahụ n'anya bitterhụnanya na - adịghị mma. Yabụ na egwu ị hụrụ ya furu efu ma kpọọ ya asị n’amaghị ama na ọ baghị uru ka ọ nọ gị nso. Nchegbu nke ọdịnihu bụkwa ihe efu, ebe ọnọdụ dị ugbu a bụ obe nke ịhụnanya.
15. Ogbenye dara njo na nkpuru obi ndi tinye onwe ha n’ime oke ihe ojoo nke uwa; ka ha hu uwa n'anya, ka ha na agu agu karie, ka ha neme ihe ochicho ha, kari inya ha na onwe ha na atumatu ha; ma lee, nchekasị, enweghị-ike, ihe egwu dị egwu, nke na-emebi obi ha, nke anaghị eji mmụọ ọrụ ebere na ihunanya nsọ.
Ka anyị kpee ekpere maka mkpụrụ obi ndị a obi jọrọ njọ na Jizọs ga-agbaghara ya ma were obi ebere ya na-enweghị njedebe dọta ha.
16. don'tkwesighi ime ihe ike, ma ọ bụrụ na ịchọghị itinye ego. O di nkpa ka itinye ezi uche nke ndi Kraist.
17. Chetanụ, ụmụntakịrị, abụ m onye iro nke agụụ na-enweghị isi, ọbụlagodi nke agụụ ihe ọjọọ na nke ọjọọ, n'ihi na agbanyeghị ihe achọrọ dị mma, n'agbanyeghị oke agụụ ahụ nwere adịghị ike mgbe niile gbasara anyị, ọkachasị mgbe agwakọtara ya na oke nchegbu, ebe Chukwu achoghi ezi ihe a, kama ihe ozo O choro ka anyi mee.
18. Banyere ọnwụnwa ime mmụọ, nke ịdị mma nke nna nke eluigwe na-edo onwe gị n'okpuru gị, m na-arịọ gị ka agbahapụ gị ma nwee ike nọrọ jụụ na nkwenye nke ndị na-ewere ọnọdụ Chineke, ebe ọ hụrụ gị n'anya ma chọọ gị ihe ọma na nke ya aha na agwa gi okwu.
Tara ahụhụ, ọ bụ eziokwu, mana arụkwaghịm; ahuhu, ma atula egwu: n'ihi na Chineke nonyere gi, you naghi emehie ya, kama hu ya n’anya; ị na-ata ahụhụ, mana kwetakwa na Jizọs n’onwe ya na-ata ahụhụ n’arụ gị ma n’etiti gị. Jizọs ahapụghị gị mgbe ị gbapụrụ ya, ihe ga-agbahapụ gị ugbu a, ma emechaa, na ị ga-ahụ ya n'anya.
Chineke nwere ike jupụta ihe niile dị n’ime e kere eke, n’ihi na ihe ọ bụla masịrị nrụrụ aka, ma ọ nweghị ike ju n’ime ya ezi obi ịchọrọ ịhụ ya n’anya. Yabụ na ị chọghị ikwenye onwe gị wee nwee obi ebere nke eluigwe maka ihe ndị ọzọ, ị ga-enwerịrị opekempe nke ahụ ma nwee udo na obi ụtọ.
19. Ikwesighi ighagbu onwe gi banyere imata ma i kweghi ma obu I kweghi. Ọmụmụ ihe gị na ịmụrụ anya ka a na-eche ihu na ebumnuche ebumnuche nke ị ga-arụrịrị ọrụ na ịlụ ọgụ ike na mmụọ ọjọọ nke mmụọ ọjọọ.
20. Jiri obi gị niile na-eche udo mgbe niile, na-eche na ị na-eje ozi nke ezigbo Nna kachasị mma, onye naanị ya na-agbadata maka ihe o kere eke, bulie ya elu ma gbanwee ya na onye kere ya.
Ghaaranụ nwute, n'ihi na ọ na-abanye n'obi ndị kegidere n'ihe nke ụwa.
21. Agaghị enwe nkụda mmụọ, maka na ọ bụrụ na a na-agba mbọ imekwu nke ọma na mkpụrụ obi, n'ikpeazụ Onye-nwe kwụọ ya ụgwọ ọrụ site n'ime ka omume ọma niile na-eto n'ime ya na mberede dị ka ogige ifuru.
22. Rosary na Oriri Nsọ bụ onyinye onyinye abụọ dị ebube.
23. Saviole toro nwanyị ahụ siri ike: "Mkpịsị aka ya, ka ọ na-ekwu, mee ihe ntagide" (Prv 31,19).
A ga m eji obi ụtọ gwa gị ihe dị n’elu okwu ndị a. Iche-ikpe-gi nile bu inyocha ihe nile nāchọ gi; gbasaa, yabụ, kwa ụbọchị ntakịrị, jiri waya mee ka atụmatụ gị dị nro ruo mgbe ogbugbu ị ga-abịarukwa isi; ma adọ aka na ntị ka ị mee ọsọ ọsọ, n'ihi na ị ga-eji eriri were ịpịa ihe ọ bụla wee were aghụghọ gị. Na-agagharị, yabụ, oge niile, ọ bụ ezie na ị ga-eji nwayọ na-aga n'ihu, ị ga-eme njem dị egwu.
24. Nchekasị bụ otu n’ime aghụghọ kachasị mma nke ezi omume na nraranye siri ike nwere ike inwe; ọ na-eme ka ọ na-ekpo ọkụ dị ka ihe dị mma iji rụọ ọrụ, mana ọ naghị eme nke ahụ, naanị iji mee ka obi jụọ oyi, ma na-eme ka anyị na-agba ọsọ naanị iji mee ka anyị sụọ ngọngọ; n'ihi nke a ị ghaghi ịkpachapụ anya oge niile, ọkachasị n'ekpere; na iji rụọ ya nke ọma, ọ ga-adị mma icheta na nsọpụrụ na ụtọ nke ekpere abụghị mmiri nke ụwa kama nke elu-igwe, yabụ na mbọ anyị niile ezughi iji mee ka ha daa, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iji ịdị uchu dozie onwe gị, mana dicha nwayọ nwayọ na nwayọ: ị ga-eme ka obi gị ghere oghe maka mbara igwe, cherekwa igirigi nke eluigwe.
25. Anyi na-edebe ihe Onye nwe Chukwu kwuru nke oma na uche anyi: na ndidi anyi, anyi g’enwe nkpuru obi anyi.
26. Ike agwụla gị ma ọ bụrụ na ị ga-agbasi mbọ ike ma chikọta obere (…).
Y’oburu n’uche na odi otu nkpuru obi ji Jesu aru, igaghi eme mkpesa.
27. Mmụọ nke Chukwu bụ mmụọ nke udo, ọ bụrụkwa na adịghị ike ndị kachasị njọ ọ na-eme ka anyị nwee mmetụta udo, obi ume ala, obi ike, nke a dabere na ebere ya.
Mmụọ nke ekwensu, n'aka nke ọzọ, na-aitesụrị, na-ewe iwe ma na-eme ka anyị nwee mmetụta, n'otu ihe mgbu ahụ, ọ fọrọ nke nta iwe megide onwe anyị, ebe anyị ga-eji ọrụ ebere mbụ gbakwunyere onwe anyị.
Yabụ na ọ bụrụ na echiche ụfọdụ na-akpasu gị iwe, chee na nhụjuanya a esighị na Chineke, Onye na-enye gị udo, bụrụ mmụọ nke udo, kama na ekwensu.
28. Mgba na-aga n’ihu ọrụ ọma a bu n’obi ime ga-adị ka antiphon na-aga n’abụ ọma a ga-abụ.
29. Oge inodu n’udo ebighi-ebi dị mma, ọ dị nsọ; mana ekwesiri idoghari ya site na mwepu nke Chineke dika odi nma: odi nma ime uche Chineke n’elu uwa karie ndu paradaịs. "Ịta ahụhụ ma ghara ịnwụ" bụ ntụgharị nke Saint Teresa. Purgatory ụtọ mgbe ị na-akwa ụta n'ihi Chukwu.
30. Ndidi zuru oke karịa ka ọ na-enweghị ntụpọ na nchekasị. Y’oburu na Onye-nwe oma choro igbatị oge elere, achoghi ime mkpesa ma nyocha ihe mere, kama buru n’uche mgbe nile na umu Israel gagharo njem n’ọzara n’agha n’iru tupu ha edowe ukwu n’ime ala nke ekwere na nkwa.
31. Hụ Madonna n'anya. Tinye Rosary Ka nne nke Chukwu di ngozi buru ibu n’obi unu.
1. Drụ ọrụ tupu ihe ọ bụla, ọbụladị nsọ.
2. childrenmụ m, ịdị ka nke a, n'enweghị ike ịrụ ọrụ nke ha abaghị uru; ọ ka nma na m’nwu!
3. Otu ubochi nwa ya nwoke juru ya si: Gini ka m ga - eme ka ima nwekwuo nna?
Azịza: Site n'iji ezi obi na izi ezi mee ebum n'uche ya, idebe iwu nke Onye-nwe. Ọ bụrụ n'iji ntachi obi na nnọgidesi ike mee nke a, ị ga-ahụkwu n'anya.
4. childrenmụ m, Mass na Rosary!
5. Nwa m nwanyị, ịgbalịsi ike izu okè mmadụ kwesịrị ị attentiona ntị na ya kacha mkpa iji mee ihe ọ bụla iji mee ihe na-atọ Chineke ụtọ ma nwaa ịghara inwe ntụpọ dịkarịsịrị nta; jiri mmesapụ aka rụọ ọrụ gị na ndị ọzọ fọdụrụnụ.
6. Chee echiche banyere ihe ị dere, nihi na Onye-nwe ga-ajụ gị maka ya. Kpachara anya, onye nta akụkọ! Onyenwe anyị nye gị afọ ojuju ịchọrọ n'ozi gị.
7. Gi onwe gi - ndi dibia - batara n ’uwa, dika m si bia, n’uzu iji mezuo ya. Chee echiche: M na-ekwu maka ọrụ oge mgbe mmadụ niile na-ekwu maka ikike ... ... nwere ọrụ nke ịgwọ ndị ọrịa; mana ọ bụrụ na iwepụtaghị ịhụnanya n'ihe ndina onye ọrịa, echeghị m na ọgwụ ike bara ụba ... Lovehụnanya enweghị ike ịme enweghị okwu. Kedu ka ị ga - esi gosipụta ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'okwu nke na - eweli ndị ọrịa ike na mmụọ? ... Weta ndị ọrịa; ga-aba uru karịa ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ.
8. Die ka obere a beesụ ime mmụọ, nke na-ebughi ihe ọzọ ma ọ bụghị mmanụ a honeyụ na wax na hive ha. Ka ụlọ gị jupụta n'ọnessụ sweetụ, udo, nkwekọrịta, dịrị umeala na obi ebere maka mkparịta ụka gị.
9. Jiri ego gị na ebe ị na-echekwa ihe Ndị Kraịst mee, mgbe ahụ ọtụtụ nhụsianya ga-apụ n'anya, ya na ọtụtụ anụ ahụ na-egbu mgbu na ọtụtụ mmadụ na-arịa ọrịa ga-enweta ahụ efe na nkasi obi.
10. Ọbụghị naanị na ahụghị m mmejọ na ịlaghachi Casacalenda ị laghachi na ndị ị maara, mana achọpụtara m na ọ dị ezigbo mkpa. Nsọpụrụ Chineke bara uru maka ihe ọ bụla ma dabaa n'ihe ọ bụla, dabere n'ọnọdụ niile, erughị ihe ị kpọrọ mmehie. Inwe obi iru ala ka ị gaghachi na nleta ndị ahụ, ị ​​ga-enwetakwa onyinye nrube isi na ngọzi nke Onye-nwe.
11. Ahụrụ m na oge niile nke afọ ka achọpụtara na mkpụrụ obi unu; na mgbe ụfọdụ ị ga-enwe oge oyi nke ọtụtụ adịghị ike, ihe ndọpụ uche, enweghị enweghị ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ; ugbua igirigi nke ọnwa Mee n’enye isi nke dị nsọ; ugbu a heats nke ọchịchọ ime ihe na-amasị nwunye anyị. Ya mere, okpukpo a na-agha mkpụrụ nke ị na-adịghị ahụ ọtụtụ mkpụrụ; agbanyeghị, ọ na-adịkarị mkpa n’oge a na-eti agwa ma pịa mkpụrụ vaịn, enwere nchịkọta buru ibu karịa nke ekwere na nkwa ma aghọrọ. You ga-achọ ka ihe niile dịrị na mmiri na udu mmiri; mana mba, ụmụ m ndị mm hụrụ n'anya, oke ọgbaghara a ga-adị ma n'ime ma n'èzí.
Na mbara igwe ihe niile ga-abụ nke oge opupu ihe ubi, dịkwa ka ihe mara mma, mgbụsị akwụkwọ niile dị ka ihe ụtọ, na oge ọkọchị dịka enwere ịhụnanya. A gaghị enwe oge oyi; mana lee n’oge oyi dị mkpa maka igosipụ onwe anyị na nke otu puku obere mana ọmarịcha omume ọma ndị a na-egosipụta n’oge ike.
12. M na-arịọ gị, ụmụ m hụrụ n'anya, maka ịhụ Chineke n'anya, atụkwala egwu Chineke n'ihi na ọ chọghị imejọ onye ọ bụla; hụrụ ya n'anya nke ukwuu n'ihi na ọ chọrọ ime gị nnukwu ihe. Naanị jegharị na ntụkwasị obi na mkpebi gị, ma jụ echiche mmụọ nke ị na-etinye maka ihe ọjọọ gị dịka ọnwụnwa ọjọọ.
13. Bụrụnụ, ụmụ m nwanyị ndị m hụrụ n'anya, ha gbara arụkwaghịm n'aka Onyenwe anyị, na-enye ya afọ ndụ gị niile, na-arịọkwa ya mgbe nile ka o jiri ha mee ihe na ndụ nke ọ ga-amasịkarị. Echegbula obi gị na nkwa na-enweghị isi nke ịdị jụụ, ụtọ na ihe ọma; mana nyekwaranụ di na nwunye dị nsọ obi unu nile, nwekwa mmetụta ịhụnanya ọzọ, ma ọbụghị n'ịhụnanya ya dị ọcha, ma na - arịọ ya ka o mejue ya obi ma nwekwaa mmegharị, ọchịchọ na uche nke ya (ihunanya) ka obi gị, dịka nne pearl, ime naanị igirigi nke elu-igwe, ọ bụghịkwa na mmiri nke ụwa; ị ga-ahụ na Chineke ga-enyere gị aka na ị ga-eme ọtụtụ ihe, ma n'ịhọrọ ma n'omume.
14. Onye agọziri agọzi ka ị bụ, mee ka yok nke ezinụlọ ahụ belata. Na-adị mma mgbe niile. Cheta na ịlụ di na nwunye na-eweta ọrụ siri ike nke ọ bụ naanị amara Chukwu nwere ike ime ka ọ dị mfe. Grace kwesịrị ịnwe amara a mgbe niile na Onye-nwe ga-edebe gị rue ọgbọ nke atọ na nke anọ.
15. Bụrụ onye mkpụrụ obi kwenyesiri ike na ezi na ụlọ gị, na-amụmụ ọnụ ọchị na ịchụ onwe onye n'àjà na-adịkwa mgbe niile.
16. Onweghi ihe na-ewute karịa nwanyị, ọkachasị ma ọ bụrụ nwanyị bụ nwunye, ọkụ, enweghị isi na mpako.
Bride lụrụ nwanyị lụrụ nwanyị ga-abụ nwanyị nwere ọmịiko n'ebe Chineke nọ, mmụọ ozi nke udo na ezi na ụlọ, onye dị nsọ ma dịkwa mma n'ebe ndị ọzọ nọ.
17. Chineke nyere m nwanne m nwanyị nke dara ogbenye ma Chukwu nara m ya. Onye agọziri agọzi ka aha nsọ Ya bụ. N'okwu ndị a na arụkwaghịm a, achọtara m ike zuru oke ịghara ịda n'okpuru nsogbu mgbu. Na ndozi a nke Chineke ka m na-agba gi ume, ị ga - ahụkwa ka ihe mgbu, dịka m,.
18. Ka ngozi nke Chukwu buru ndi n’enye gi, na akwado ma duzie gi! Bido ezinulo nke ndi otu Kristi ma ọ bụrụ n’inwee udo n’ime ndụ a. Onye-nwe nye unu ụmụ na amara ka o duzie ha n’ụzọ nke elu-igwe.
19. Obi ike, obi ike, ụmụaka abụghị mbọ!
20. Nwee nkasi obi, ezi nwanyị, kasie onwe gị obi, n'ihi na aka nke Onyenwe anyị nke na-akwado gị emebeghị mkpụmkpụ. Ewoo! e, ọ bụ Nna nke mmadụ nile, ma n’ụzọ dị otu a ọ bụ maka ndị na-enweghị obi ụtọ, ma n’ụzọ ọzọ otu o si bụrụụrụ gị onye bụ nwanyị di ya nwụrụ, na nne di ya nwụrụ.
Tụfuo na Chineke naanị maka nchegbu gị niile, ebe ọ na-elekọta gị na nke ụmụ ntakịrị mmụọ ozi ụmụaka atọ ọ chọrọ ka ị chọọ gị mma. Childrenmụaka ndị a ga-anọ ebe ahụ maka omume ha, nkasi obi na ngụgụ ha na ndụ ha niile. Na-arịọkarị maka agụmakwụkwọ ha, ọ bụghị ọtụtụ sayensị na omume. Ihe niile dị gị n’obi, ma hụ ya n’anya karịa nwa anya gị. Site na ikuzi uche, site na ezi ihe omumu, gbaa mbọ hu na mmuta nke obi na nke okpukperechi anyi na ibe ya aghaghi ijikọ; onye n’emeghị nke a, ezigbo nwanyị m, na-enye ọnya na-anwụ anwụ n’obi mmadụ.
22. N'ihi gịnị ka ụwa ji dị njọ?
«Ọ dị mma ịnụ ... Ọ nwere nne na-eme ihe. Nwa ya nwoke, nọ ọdụ na oche dị ala, na-ahụ ọrụ ya; mana kpodoro isi. O hu uzo nile nke ihe mkpuchi ahu, eriri mgbagwoju anya ... O wee si: “Mama m you nwere ike mata ihe I n’eme? Ọrụ gị amachaghị nke ọma?! "
Mgbe ahụ nne na-agbada chassis ahụ, ma gosipụta akụkụ dị mma nke ọrụ ahụ. Agba ọ bụla dị n'ọnọdụ ya na ụdị eriri dịgasị iche iche na-esonye na nkwekọ nke atụmatụ ahụ.
N'ebe a, anyị na-ahụ akụkụ azụ nke embroidery. Anyị na-anọdụ ala na oche dị ala ».
23. Akpọrọ m mmehie asị! Ọ dabara nke ọma na obodo anyị, ọ bụrụ na ọ bụ nne nke iwu chọrọ imezu iwu ya na omenala n'echiche a site na iji eziokwu na ụkpụrụ Ndị Kraịst.
24. Onye nwe egosi ma kpọọ oku; mana ị chọghị ịhụ na ịzaghachi, maka na ị masịrị gị.
Ọ na --eme, mgbe ụfọdụ, n’ihi na a nụwo olu mgbe niile, na a naghị anụ ya ọzọ; mana Onye-nwe na-enye ìhè ma na-akpọ. Ha bụ ndị ahụ tinyere onwe ha n'ọnọdụ ebe ha na-agaghị anụ ya ọzọ.
25. Enwere ọ joụ dị egwu na ụdị ihe mgbu dị ukwuu nke na okwu enweghị ike igosipụta. Mkpebi bụ ngwaọrụ ikpeazụ nke mkpụrụ obi, n'enweghị obi ụtọ dịka a na-enwe oke nrụgide.
26. Ọ ka mma ịta ahụhụ, nke Jizọs ga - achọ zitere gị.
Jizọs, onye na-enweghị ike ịta ahụhụ ogologo oge iji mee ka ị taa ahụhụ, ga-abịa rịọ gị wee kasie gị obi site na ịkụnye obi ike ọhụrụ n'ime mmụọ gị.
27. Echiche niile nke mmadụ, ebe ọbụla ha siri bịa, nwere ndị ọma na ndị ọjọọ, mmadụ ga-ama etu ọ ga-esi were were mma ya niile were were ya nye Chineke, wepụsịa ihe ọjọọ.
28. Ehee! Na ọ bụ nnukwu amara, ezi nwa m nwanyị, ibido ijere ezi Chineke a ozi, ebe afọ ndụ na - eto, na - eme ka anyị nwee ike ịnabata mmetụta ọ bụla! Oh !, lee ka esi ekele onyinye a, mgbe enyere ifuru ya na nkpuru mbu nke osisi.
Oleekwa ihe nwere ike igbochi gị iwere onwe gị nye Chineke ezi ihe site n’ikpebi n’otu oge ịgba ụwa, ekwensu na anụ ahụ, ihe ndị nna nna anyị mere kpamkpam nye anyị Baptism? Okwesighi ka àjà a n’aka gị Jehova?
29. N’ụbọchị ndị a (nke novena nke Exaculate Conception), ka anyị kpee ekpere!
30. Cheta na Chukwu no n’ime anyi mgbe anyi no n’onodu amara, ma n’èzí, ya bu ikwu okwu, mgbe anyi no n’onye nmehie; mana mmụọ ozi ya anaghị ahapụ anyị…
Ọ bụ enyi anyị kachasị obi eziokwu ma nwee ntụkwasị obi mgbe anyị na-adịghị emejọ ya iji mee omume na-adịghị mma.
1. Chefuo ya, nwa m, hapụ ibipụta ihe ị chọrọ. M na-atụ egwu ikpe nke Chineke ọ bụghị nke mmadụ. Naanị mmehie na-atụ anyị ụjọ n’ihi na ọ na-akpasu Chineke iwe ma na-akparị anyị.
2. goodnessdị mma nke Chineke abụghị naanị ajụ mkpụrụ obi ndị chegharịrị, kama ọ na-achọkwa mkpụrụ obi kpọrọ ekwo nkụ.
3. Mgbe ị nọ n ’ime obi-ike gị mee dịka halum nke dị n’elu antenna nke ụgbọ mmiri ahụ, ya bụ, si n’elu ụwa bulie elu, were echiche na obi to Chineke, onye naanị gị nwere ike ịkasi gị obi wee nye gị ike ịnagide ule ahụ n’ụzọ dị nsọ.
4. Ala-eze gị anọghị anya ma ị na-eme ka anyị sonye na mmeri gị n'elu ụwa wee soro na alaeze gị nke eluigwe. Nyere na, n'enweghi ike inwe nkwukọrịta nke ọrụ ebere gị, anyị na-ekwusa ozi ọma banyere ala-eze gị site na ihe atụ na ọrụ. Weghara obi anyị n’oge ka ị nweta ha ebighi-ebi. Na anyị ewepụrụghị mkpanaka gị, ndụ ma ọ bụ ọnwụ abaghị uru nke gị. Kwe ka ndụ si n’etiti gị nweta nnukwu ịhụnanya ka ọ gbasa na mmadụ ma mee ka anyị nwụọ oge niile ka ọ dịrị naanị gị ma gbasaa gị n’ime obi anyị.
5. Anyi n’eme nma, ebe ayi nwere oge, anyi n’enye Nna anyi nke Eluigwe otuto, anyi g’edoo onwe anyi nsọ ma setịpụ ezi ndi ọzọ.
6. Mgbe ịgaghị enwe ike ije ije n'okporo ụzọ nke na-eduga na Chineke, nwee afọ ojuju n'obere ụzọ, werekwa ndidi chere ka ị ga-enwe ụkwụ ga-agba ọsọ, ma ọ bụ ka ọ nwee nku iji efe. Obi dị m ụtọ, ezigbo nwa m nwanyị, ịnọ ugbu a bụ obere akwu akwụ na-adịghị anya ọ ga-abụ nnukwu anu nwere ike ime mmanụ a honeyụ.
7. wedata onwe-gi n’ala n’ihu Chineke na ndi mmadu, nihi na Chineke na-agwa ndi na -eme nti ha nti. Bụrụ onye na-ahụ n'anya ịgbachi nkịtị, n'ihi na ikwu ọtụtụ okwu enweghị mmejọ. Nọgide na ndoso a ka o kwere mee, nihi na n ’nweghachi, Onye nwe anyi na-agwa nkpuru obi okwu na nkpuru obi na enwe ike ige nti olu ya. Belata nleta gị ma tachie obi gị n'ụzọ nke Ndị Kraịst mgbe enyere gị aka.
8. Chineke na-ejere onwe ya ozi naanị mgbe ọ jere ozi dịka ọ chọrọ.
9. Daalụ ma jiri nwayọ susuo aka Chineke n’abụ gị; ọ bụ aka nna na-eti gị mgbe niile n’ihi na ọ hụrụ gị n’anya.
10. Tupu Mass, kpesiri Nwanyi Nwaanyị ekpere!
11. Kwadebe nke ọma maka Mas.
12. Ezigbo njọ bụ njọ karịa njọ n'onwe ya.
13. Obi abụọ bụ mkparị kasịnụ a na-efe Chineke.
14. Onye obula ragide onwe ya n’elu uwa nogidegidere n’elu ya. Ọ dị mma ịhapụ obere oge, karịa ihe niile otu mgbe. Anyị na-eche maka mbara igwe oge niile.
15. O sitere n ’ihe akaebe na Chineke na-ejikọ mkpụrụ obi n’aka onye ọ hụrụ n’anya.
16. Egwu maka ịtụfu gị na aka nke ịdị mma nke Chineke dị ịtụnanya karịa egwu nwa jidere na ogwe aka nne ya.
17. Bịanụ, nwa m nwanyị m hụrụ n’anya, anyị ga-akpachara anya zụlite obi aekere eke, ma echefula ihe ọ bụla nke ga-enye obi ụtọ ya; na agbanyeghị na oge ọ bụla, nke ahụ bụ, n'ọgbọ ọ bụla, enwere ike ịme ihe a, a ga-emerịrị ya, na agbanyeghị, nke ị nọ, bụ nke kachasị adaba.
18. Banyere ọgụgụ gị, ọ nweghị ihe ị ga-enwe mmasị na ya, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla ị ga-eme. Ọ dị nnukwu mkpa ka ị tinye ihe ọgụgụ ndị a na Akwụkwọ Nsọ (Akwụkwọ Nsọ), nke ndị nna nsọ niile kwadoro. Enweghị m ike ịhapụ gị n'ọgụgụ nke mmụọ ndị a, na-akwụkwazu ntozu gị. Ọ dabara na ị ga-ewepụ ajọ mbunobi ị nwere (ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ọtụtụ mkpụrụ a na-atụghị anya ya site na ọgụgụ ndị dị otú ahụ) gburugburu ụdị na agba nke ekpughere Akwụkwọ ndị a. Gbalịsie ike ime nke a ma kọọrọ ya Onyenwe anyị. Enwere aghụghọ dị ukwuu na nke a ma enweghị m ike izonahụ gị ya.
19. Ememe niile nke areka mara mma… Ista, ee, bụ otuto… mana ekeresimesi nwere nro, ụtọ ụmụaka na-ewere obi m niile.
20. Obi-ebere gi meriri obi m, ihu-n’anya gị na-adigidekwa m, gị Nwa nke elu-igwe. Kwe ka nkpuru obi m gbazee n’onyinye gi n’ihi ihunanya, oku gi ga ericha m, kporo m oku, kporo m n’ukwu gi ma nogide n’iru gi n’ihi ihunanya ya ma mekwaa idi nma gi na ebere gi.
21. Mama m Meri, duruo m na ọgba nke Bet-lehem ma mee ka m daba na nchebara echiche nke ukwu na nke dị ebube imeghe ọnụ jiri nwayọ nke abalị a mara mma.
22. Nwa Jesus, buru kpakpando duzie gi n'uzo nke ndu a.
23. Ogbenye, obi umeala, nleda anya na nleda ahu gbara Okwu ahu anya; mana anyị ghọtara otu ihe site n’ọchịchịrị nke Okwu a ji mechie anụ arụ, anyị na-anụ olu, anyị na-amata eziokwu dị ebube. I jiri ịhụnanya mee ihe a niile, naanị ihe ị na-akpọ anyị bụ ka anyị hụ anyị n'anya, naanị ihe ị ga-agwa anyị gbasara ịhụnanya, naanị ị ga-enye anyị ihe akaebe nke ịhụnanya.
24. Ekwela ka ịnụ ọkụ n’obi gị nwee obi ilu, ma ọ bụ bụrụ onye na-abọ ọbọ; ma nweere onwe gị na ntụpọ ọ bụla; nọnụ, bekee, mee amara, nwe udo, ma na-ewulikwa elu. Ewoo, onye na-ahụghị, nwa m nwanyị mara mma, Nwa ntakịrị Betlehem, na mgbe anyị na-akwado ya, onye na-ahụghị, asị m, bụrụ ịhụnanya ya na-enweghị atụ maka mkpụrụ obi? Ọ na-abịa ịnwụ ịzọ nzọpụta, dịkwa umeala n'obi, na-atọ ụtọ ma na-ahụ n'anya.
25. Bie obi uto na obi ike, opekata mpe na elu elu nke nkpuru obi, n'etiti ule nke Onye-nwe debere gi. Na-aerụrị ọ Iụ na obi ike, ana m ekwughachi, n'ihi na mmụọ ozi ahụ, onye na-ebu amụma banyere ọmụmụ nke obere Onye Nzọpụta anyị na Onye-nwe, na-ekwupụta ịbụ abụ na ịbụ abụ na-ekwupụta na ọ na-ekwusara ọ joyụ, udo na obi ụtọ nye ndị nwere ezi uche, nke mere na ọ nweghị onye na-anaghị eme mara na inata nwatakiri a, o zuru ezu inwe ezi uche.
26. Site na mgbe omumu Jisos gosiputara anyi oru anyi, nke bu ilelị ihe uwa huru n'anya.
27. Jizọs kpọrọ ndị ọzụzụ atụrụ dara ogbenye na ndị dị mfe site n’aka ndị mmụọ ozi ka ha gosipụta ya. Kpọku ndị maara ihe site na sayensị ha. Ihe niile, site na mmetụta nke ime nke amara ya, gbara ọsọ gaa fee ya ofufe. Ọ na - akpọ anyị niile site n'ike mmụọ nsọ ma na - agwa anyị amara ya. Ugboro ole ka o jiri ịhụnanya kpọọ anyị? Oleekwa otú anyị siri zaghachi ya ngwa ngwa? Chinekem, ekpuchitara mu na nkpab filledu m n’inwe iza aziza.
28. Oke ihe, nke juputara na omume ha, na-ebi ọchịchịrị na njehie, na ha echeghị na ha matara ihe nke Chineke, na echiche ọ bụla banyere nzọpụta nzọpụta ha, ma ọ bụ ihe ọ bụla gbasara ịmara ọbịbịa nke Mesaịa ahụ na ndị mmadụ nọ na-ama amụma, ndị amụma buru amụma ma buo amụma.
29. Ozugbo oge awa ikpeazụ anyị gachara, nbibi nke obi anyị akwụsịwo, ihe niile ga-adakwasị anyị, yana oge kwesịrị anyị na oge anyị ga-emebi emebi.
Dị ka ọnwụ ga-ahụ anyị, anyị ga-ewepụta onwe anyị n’iru onye ikpe nke Kraịst. Arịrịọ nke arịrịọ anyị, anya mmiri anyị, nchegharị anyị, nchegharị anyị, nke ka nọ n'ụwa ga-enwetawo anyị obi nke Chineke, gaara eme ka anyị, site n'enyemaka nke Sakrament, site n'aka ndị mmehie nke ndị nsọ, taa karịa ihe ọ bụla. bara uru; oge ebere erubigala, ugbu a ka ikpezi ikpe na-amalite.
30. Trova il tempo per pregare!
31. Anaghị echekwa nkwụ nke otuto ma ọ bụghị naanị ndị na - alụ ọgụ ọgụ ruo ọgwụgwụ. Yabụ ka ọgụ anyị dị nsọ bidoro n’afọ a. Chineke ga enyere anyị aka wee were mmeri ebighi ebi kpube anyị okpueze.
← Na post gara aga Gara aga post:Septemba 23: Onyinye nye St. Pio nke Pietrelcina maka amara
Ọzọ Post → Post ozo:Nwanna Modestino: otu esi esi bụrụ ụmụ ime mmụọ nke Padre Pio taa